Ukubheka inkinga ye-Othipron ngenxa yenkulumo-mpikiswano (ikholomu 457) - URabi Michael Avraham
Ukubheka Inkinga Ye-Othipron Ekukhanyeni Kwempikiswano (Ikholomu 457)
80 imibono	/ L. Adar A. 03 - 03/2022/XNUMX 03 / 03 / 2022
Kukholomu edlule ngethule ingxabano phakathi kwami ​​noDavid Enoch (bheka Lapha Ukuqoshwa) embuzweni wokuthi uNkulunkulu uyadingeka yini njengesisekelo sokufaneleka kokuziphatha (noma: Ingabe ngaphandle kukaNkulunkulu zonke izinto zivumelekile). Phakathi nengxoxo, umongameli (uJeremy Fogel) uphakamise inkinga ye-Othipron, okwathi ebusweni ibonakala ingahlobene nengxoxo. Ngemva kwesikhashana ngakhunjuzwa inkunzi 278 Sengike ngabhekana nenkinga kanye nemithelela yayo ngobufakazi obuvela kukuziphatha (ukulengiswa kokuziphatha kuNkulunkulu). Engxoxweni engenhla ngiwuphendule kafushane umbuzo, futhi lapha ngizobuyela kulolu daba ukuze ngicacise ukuhlotshaniswa kwayo nenkulumo-mpikiswano no-Enoke futhi ngilole ukwehlukanisa engikwenzile lapho nakukholomu edlule.
Kubalulekile kimi ukuthi ngethule ngokuthi ngiphawule ukuthi umqondo kaNkulunkulu engisebenza kuwo le kholomu awufani ngempela noNkulunkulu “onciphile” engikhulume naye kukholamu edlule. Ezinye zeziphakamiso engizenzayo lapha ziyisengezo esingeyona ingxenye kaNkulunkulu "ethambile" edingekayo ukuze anikeze ukuqinisekiswa kwemithetho yokuziphatha. Ngizobuyela kuleli phuzu ekupheleni kwekholomu.
Enkulumweni kaPlato A. Eitifron Kubuzwa umbuzo olandelayo: Ingabe okuhle kuhle ngoba onkulunkulu bekufuna, noma ingabe onkulunkulu bafuna okuhle ngoba kukuhle. Ngamanye amazwi, umbuzo uwukuthi ingabe ikhona yini incazelo eqondile yokuhle, noma ukuthi okwenza kube kuhle yisinqumo sonkulunkulu, kodwa ngezinga elifanayo banganquma ukuthi noma yikuphi okunye ukuziphatha kuhle noma kubi. Konke kunikezelwe ekuthandeni kwabo okungahleliwe. Umbuzo ofanayo nawo ungaphakanyiswa maqondana no-Gd, kanye no-Avi Sagi kanye noDaniel Statman, encwadini yabo. Inkolo nokuziphatha, Bamba ingxoxo enemininingwane eminingi ngalolu daba. Isiphetho sabo lapho siwukuthi cishe bonke ongqondongqondo abangamaJuda bakhuthaza le nketho yokugcina. Ngeke ngingene kuwo wonke ama-nuances nezingxabano ezivela encwadini engenhla ngokujwayelekile (ngicabanga ukuthi kukhona okunganembile kuyo), futhi ngizozibophezela ekubukeni kafushane kwesisekelo esiyisisekelo sezinhlangothi zombili.
Ngakolunye uhlangothi, ngokwemfundiso yenkolo sithatha ngokuthi uNkulunkulu unamandla onke futhi akangaphansi kwanoma yini. abekho ngaphandle Kwakhe. Wadala umhlaba futhi wamisa imithetho ekhona kuwo. Okushoyo ukuthi ubengazinquma nganoma iyiphi enye indlela abeyicabanga. Ngakho-ke ayikho incazelo eqondile kokuhle nokubi. Ngakolunye uhlangothi, uma umuntu ethatha lo mbono, isiphetho siwukuthi akunakwenzeka ukuthi sithi uNkulunkulu muhle. Inkulumo ethi uNkulunkulu muhle ithatha ngokuthi kukhona okuhle okuchazwayo kungakhathalekile ukuthi ungubani, futhi impikiswano iwukuthi kukhona ukuvumelana phakathi kokuziphatha kwakhe nezimfuneko kanye nesimiso esifanayo somgomo wokuhle. Kodwa uma kuyisinqumo sakhe esichaza umqondo wokuhle, khona-ke isitatimende sokuthi uNkulunkulu muhle asilutho ngaphandle kwencazelo ye-tautological (noma i-theorem yokuhlaziya) hhayi ingxabano. Ngokuyisisekelo lisho ukuthi: UNkulunkulu ufuna lokho akufunayo. Kodwa lokhu kuyiqiniso kithi sonke.
Izazi zemfundiso yenkolo eziningi (futhi ngisho nonobugovu omncane uzihlanganisa nazo) zivame ukucabanga ukuthi lesi yisimo esiyinkinga. UNkulunkulu muhle ngempela futhi wayengeke abe ngenye indlela. Lokhu kuvele kucabange ukuthi okuhle kuchazwa ngendlela efanele futhi uNkulunkulu ngokwakhe ungaphansi kwale ncazelo. Yebo wayengasidida futhi aphuphuthekise amehlo ethu ukuze angahlukanisi phakathi kokuhle nokubi, kodwa wayengenakukwazi ukunquma okuhle nokubi. Njengoba ngishilo, naphezu kobunzima bemfundiso yenkolo, kubonakala sengathi iningi labacabangi bemicabango yamaJuda libamba indlela yesibili.
Umbono wokuqala ungacwengwa kancane, futhi uhlelwe kanje: Sinombono mayelana nokuhle nokubi. Impikiswano iwukuthi intando kaNkulunkulu ivumelana nomuzwa ofanayo. Kodwa lo mqondo utshalwe kithi nguye, ngakho-ke akukho mqondo wenhloso wokuhle nokubi. Ngakho-ke kungashiwo ukuthi lesi sitatimende siyisimangalo ngempela (hhayi incazelo), kodwa ngesikhathi esifanayo isimangalo esiphathelene nemiqondo yethu hhayi umhlaba ngokwawo. Ngokuqondene nomhlaba ngokwawo, inkulumo ethi “uNkulunkulu muhle” ayisho lutho (iwuphawu olungenalutho, i-tautology).
Lesi yisimo esithile senkinga yobudlelwano phakathi kwencazelo nokufundisa. Ukwenza isibonelo izazi zefilosofi ezihlaziyayo ezivame ukusisebenzisa (bona isib. Lapha), Isimangalo esithi: Inkanyezi yokusa iyinkanyezi yokuhlwa. Yilokhu osekukade kubhekwa njengezinkanyezi ezimbili ezihlukene (enye ibonakala kusihlwa enye ekuseni), kodwa ekugcineni sathola ukuthi inkanyezi efanayo ngokwayo. Manje siyabuzwa: Ingabe lesi simangalo siyisimangalo esingenalutho noma incazelo (ithiyori yokuhlaziya)? Ingabe inokuqukethwe noma i-tautology engenalutho? Ngokusobala umusho onjalo awusho lutho, ngoba uwuphawu phakathi kwento ngokwayo. Kodwa umqondo wethu wukuthi kukhona okusha kulo musho. Kusifundisa okuthile ngemibono yethu. Izinkanyezi ezimbili ebesicabanga ukuthi zihlukile ziyinkanyezi efanayo uqobo. Lo musho ushintsha ulwazi lwethu lomhlaba, nakuba ngokokuqukethwe kwawo okuhlosiwe ubonakala sengathi ungubani ongenalutho.
Qaphela ukuthi lokhu kunjalo kunoma yisiphi isimangalo sikamazisi sohlobo: a ngu-b. Uma sicabanga ukuthi lesi simangalo silungile, kusho ukuthi: a is a, i.e. i-tautology engenalutho. Isixazululo sokuhlaziya inkinga yencazelo yezicelo zobunikazi umehluko phakathi kwencazelo nokufundisa. Izazi zefilosofi ezihlaziyayo (ezilandela uFrege) zithi ngokusho kobunikazi obunjalo kunencazelo kodwa hhayi umyalo (noma umbala). Inencazelo engelona ize noma encane kithina, kodwa uma ubheka ukuthi ikhombani emhlabeni, iyisimangalo esingasho lutho.
Manje singabuyela enkingeni ye-Othipron. Ngasohlangothini lokuthi uNkulunkulu uchaza okuhle nokubi, kungaphikiswa ngokuthi inkulumo ethi muhle inencazelo kodwa hhayi isiyalo. Ngokwemfundiso yayo (umbala) ayinalutho njengoba inhle ngokwencazelo yokuhle. Konke abezokwenza bekuzomshiya ngaphansi kwencazelo yokuhle, ngakho u-Amira omuhle akanalutho okuqukethwe (ukuhlaziya).
Kodwa kunzima kimi ukwamukela ngisho nala mazwi athambile. Umuzwa olula uwukuthi ngempela uNkulunkulu kufanele abe muhle, okusho ukuthi ukusho ukuthi muhle akuyona incazelo engenalutho kodwa isimangalo. Ukube bekungenjalo, bekungeke kube nasizathu sokuzibandakanya ebuhleni bukaNkulunkulu, futhi bekungeke kube khona imibuzo ngakho emikhubeni ebonakala ingcolile kithi (njengokuboshwa kuka-Isaka, ukubhujiswa kuka-Amaleki, kanye like). Kufanele kuqondwe ukuthi uma lokho uNkulunkulu akufunayo kuchazwa njengokuhle akukho ndawo yokungabaza kokuziphatha ngakho. Wayala ukulandela u-Isaka ngakho-ke ukuboshwa kuka-Isaka kuyinto enhle. Umzwa sengathi kunokuhlukana lapha phakathi komyalo waphezulu nokuziphatha ukhomba lapho siqala khona ukuthi uNkulunkulu muhle. Njengoba nje ukuba khona kwenkulumompikiswano yezimiso zokuziphatha kukhombisa umgomo wezimiso zokuziphatha (uma kungenjalo bekungeke kube khona okuphikisana ngakho) futhi ukuba khona kokugxeka kokuziphatha kukhombisa ubuqotho bamaqiniso okuziphatha (ngaphandle kwalokho asikho isikhala sokugxekwa kwezimo zengqondo ezingenasimilo kanye ukuziphatha).
Isiphetho siwukuthi intuition elula yezenkolo isifundisa njengolunye uhlangothi lwenkinga ye-Othipron ukuthi okuhle kuchazwe ngokucacile nangokuphoqelela ngisho noNkulunkulu. Okusho ukuthi, uNkulunkulu ufuna izinto ngoba zizinhle hhayi ngenye indlela. Kungale ndlela kuphela lapho kungase kuthiwe kuhle, futhi kuphinde kugxekwe (noma ukufuna izincazelo) ngezimo zokungaziphathi kahle. Kodwa njengoba sesibonile le ndlela iphakamisa ubunzima obuphambene, futhi manje ngizoqhubeka nokubhekana nayo.
Phakathi kwemithetho ye-physics kanye "nemithetho" ye-logic
Le ndlela iphakamisa ubunzima bezenkolo obuphambene. Kungenzeka kanjani ukuthi uNkulunkulu, owadala zonke izinto nakho konke okwenziwa ngamandla akhe, usengaphansi kwesethi yemithetho engaphandle angazange ayimise? Ukuze sikuqonde lokhu, kufanele sibuyele emehlukweni engiwenzile lapha esikhathini esedlule phakathi kwezinhlobo ezimbili zemithetho (bona isib. ikholomu. 278). Impela uNkulunkulu akakho ngaphansi kwemithetho yefiziksi ngoba nguye owayidala, nomlomo owenqabelayo ngumlomo ovumayo. Akakho ngaphansi kwemithetho yezwe vele (uma nje ngoba engesona isakhamuzi sakhona). Kodwa ngakolunye uhlangothi "kungaphansi" kwemithetho ye-logic. Imithetho yengqondo "iphoqelelwe" kuNkulunkulu. Akakwazi ukwenza unxantathu oyindilinga noma aphambuke endleleni enengqondo, ngenxa nje yokuthi ayikho into enjengonxantathu oyindilinga futhi asikho isilwane esinjalo esiphambuka endleleni enengqondo. Unxantathu ngokwencazelo awuwona oyindilinga. Lokhu akubangelwa yinoma yimuphi umthetho obekwe kunxantathu ngenxa yesidingo, kodwa ngenxa yemvelo yawo. Ngokuchazwa kwayo njengonxantathu kulandela ukuthi ayindilinga futhi ayikwazi ukuba yindilinga. Ngakho-ke ukungakwazi ukwenza unxantathu oyindilinga akubangelwa yisithiyo sangaphandle esibekwe ku-Gd, ngakho futhi akuwona umkhawulo kuwo wonke amandla awo, noma ukonakala kuwo.
Isidalwa esinamandla onke siyakwazi ukwenza konke ongakucabanga ngisho nasemcabangweni. Kodwa unxantathu oyindilinga umqondo ongenalutho. Ayikho into enjalo futhi yinto engacabangeki. Ngakho-ke ukungakwazi kukaNkulunkulu ukudala into enjalo akukona ukungasebenzi emandleni akhe. Cabanga ngomuntu ekubuza ukuthi uNkulunkulu angawenza yini unxantathu oyindilinga. Bengithi akaqale angichazele lo mqondo futhi mhlawumbe ngingawuphendula. Yebo ngeke akwazi ukuyichaza (ingabe inama-engeli abukhali noma cha? Iyini isamba sama-engeli ayo? Ingabe wonke amaphuzu aphezu kwayo ayibanga elilinganayo ukusuka kulelo phuzu?), Ngakho-ke umbuzo uyazibona.
Njengoba ngichazile lapho, okuyisisekelo sokudideka yigama elithi “umthetho,” elisetshenziswa kulezi zimo ezimbili ngomqondo ohlukile. Imithetho yefiziksi imithetho eyamiswa nguNkulunkulu emvelweni wendalo. Lo mthetho uyisinqumo sakhe sokudala imvelo ethile yomhlaba ayidalile ngezindlela eziningi ezahlukene. Wayengadala neminye imithetho yemvelo. Ngokuphambene, imithetho yokucabanga akuyona imithetho ngomqondo ofanayo. Ukusetshenziswa kwegama elithi "umthetho" kumongo onengqondo kubolekiwe. Kumane kuyincazelo yezinto hhayi into yangaphandle ephoqelelwe kuzo. Unxantathu awuwona oyindilinga noma ngoba kukhona owenqabelayo noma ngoba wenqatshelwe. Ngenxa yokuba unxantathu imane nje ayindilinga. Ngakho-ke akulungile ukusho lapha ukuthi uNkulunkulu wakhetha uhlelo olulodwa olunengqondo ezinhlelweni eziningana okungenzeka. Alukho olunye uhlelo olunengqondo. Kusukela manje kusimo esifana nesemithetho yengqondo ngizosebenzisa igama elithi "umthetho" kumamaki wokucaphuna.
Isimo semithetho yokuziphatha
Umbuzo ophakamayo manje yisimo semithetho yokuziphatha: Ingabe le mithetho ngomqondo wemithetho ye-physics, noma ingabe "imithetho" ngomqondo "wemithetho" ye-logic? Labo abakhuthaza uhlangothi lokuqala lwenkinga ye-Othipron bakholelwa ukuthi imithetho yokuziphatha ifana nemithetho ye-physics, ngakho-ke nguNkulunkulu onqumayo futhi oyichazayo. Olunye uhlangothi lwenkinga, ngakolunye uhlangothi, luthatha ukuthi "imithetho" yokuziphatha ifana "nemithetho" yengqondo (le "imithetho" hhayi imithetho), ngakho-ke iphoqelelwe kuNkulunkulu. Wayengeke enze isimiso esihlukile semithetho yokuziphatha. Isibonelo, akakwazi ukudala izwe lapho kuzovela okunye ukuziphatha (ukuthi ukubulala noma ukuhlukumeza abantu kuzoba nezenzo ezinhle). Ukuziphatha ngokwencazelo kuyakwenqabela ukubulala.
Yebo angakwazi ukudala izwe lapho abantu beyojabulela khona ukuhlushwa (kungaba okulungile ezweni elinjalo ukubabiza ngokuthi “ukuhlukunyezwa”?), Khona-ke kungase kungabi khona inkinga yokuziphatha ekubangeleni ukuhlupheka. Kodwa lapho okubangela ukuhlupheka akulona ishwa. Ukudweba abantu kuyinto embi kunoma yimuphi umhlaba okungenzeka. Imayelana nezwe elihluke ngokuphelele, okungukuthi, izwe lapho ukuhlupheka kungabangeli khona ukudabuka. Umuntu angabuye acabange ngezwe lapho ukugconwa kwabantu kuchazwa ngokuthi muhle, kodwa akulona izwe elinokuziphatha okuhlukile kodwa izwe lapho abantu bengaboni imithetho yokuziphatha (kanti noNkulunkulu owakudalayo akanasimilo. ). Ungashintsha noma iyiphi ipharamitha kumvelo yomhlaba futhi udale umhlaba ohlukile lapho uzohluka khona. Kodwa uma kubhekwa ubunjalo balowo mhlaba, imithetho yokuziphatha itholakala kuyo ngokungananazi (iyaphoqelelwa kithi). Kubonakala kimi ukuthi yilokhu okusekela isitatimende esaziwayo seRamchal, "imvelo enhle yokwenza okuhle." U-Gd ngokwemvelo kufanele enze okuhle. Akanayo enye indlela (kuyaphoqa kuyena).
Lokhu kusho ukuthi isimangalo esithi "ukubulala kubi" siyahlaziya, njengomthetho wokungqubuzana. Nakuba lokhu kuyiqiniso elingokokuziphatha, akunqunyelwe (kodwa kuyadingeka). Ngakho-ke asikho isithiyo sokusho ukuthi kuphoqelekile (noma kunalokho: "kuphoqelelwe") kuNkulunkulu, njengoba nje umqondo "uphoqelelwe" kuye. Lokhu kuhlukile emithethweni yemvelo isibonelo. Thatha njengesibonelo isimangalo somthetho wamandla adonsela phansi: noma yiziphi izinto ezimbili ezinobunzima zidonsa zodwa ngamandla alingana nomkhiqizo wesisindo futhi alinganise ngokuphambene nesikwele sebanga eliphakathi kwazo. Lesi akusona isimangalo sokuhlaziya, futhi kungaba amanga. Kwakungaba khona umhlaba lapho umthetho wamandla adonsela phansi wawuyoba ohlukile (isb. amandla alingana nebanga lesithathu). Ngakho-ke umthetho onjalo unikezelwe kuNkulunkulu, futhi isinqumo sakhe kuphela esinquma okuqukethwe kwawo.
Ukuthi kuhlangana kanjani nekholomu yangaphambilini
Kukholomu edlule ngaphikisa ngokuthi angeke kube khona ukuziphatha okuhle ngaphandle kukaNkulunkulu. Ingabe lokhu akuphikisani nokusho kwami ​​lapha kokuthi ukuziphatha kuphoqelekile kuNkulunkulu naphambi kwakhe, ngakho futhi akuwona umkhiqizo wentando yakhe? Ngokusobala kukhona ukuphikisana okuphambili lapha. Manje ngiyaqonda ukuthi lokhu mhlawumbe kwakuyilokho uJeremy Fogel, umgqugquzeli, owaphakamisa inkinga ye-Othipron engxoxweni yethu futhi wangibuza umbono wami ngakho.
Engxoxweni ngokwayo ngichaze kafushane ukuthi ngehlukanisa phakathi kwencazelo yokuhle nokubi nokuzinikela kwethu kukho. Incazelo yokuhle nokubi iphoqelelwe kuNkulunkulu futhi ngeke ibe ngenye indlela. Ngisho naye akakwazi ukunquma ukuthi ukubulala kuhle, noma ukuthi ukusiza abanye kubi. Kodwa ukuzibophezela ekwenzeni okuhle nokugwema okubi akukho ngaphandle kukaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, isimangalo esivamile sokuthi ukubulala akuvunyelwe, okusho ukuthi kunobuqiniso obubophezelayo eqinisweni lezimiso zokuziphatha okwenqatshelwe ukubulala, akuphoqiwe kuNkulunkulu. Kususelwa emyalweni wakhe futhi kwenziwa nguye.
Uma sibuyela emqondweni 'wamaqiniso okuziphatha', singakubeka ngale ndlela: angase abe khona ngokwawo, njengoba u-David Enoch esho (okungukuthi akuyena uNkulunkulu owawadala), kodwa njengoba ngiphikisane naye ngisho noma ekhona futhi abekwe kwezinye. ekhoneni lezwe lemibono (kungukuthi), Kusengenzeka ukuthi ayingibophi (kufanele). Ngizosho ukuthi kukholamu edlule ngehlukanise phakathi kombuzo wokuthi ubani owadala amaqiniso okuziphatha (lapho u-Enoke asebenzelana khona) kanye nombuzo wokuthi ubani owanika ubuqiniso (engasebenza kuwo). Engikuchazile lapha ukuthi nakuba uNkulunkulu engazange adale amaqiniso okuziphatha (aphoqelelwe Kuye), umyalo Wakhe kuphela ongabanika amandla abophayo.
Manje umuntu angase abuze ukuthi yini ebophezela uNkulunkulu ngokwakhe ekuziphatheni? Uma emuhle naye kufanele azinikele ekuziphatheni kahle (ekuhleleni kwakhe ngokwezigaba). Ingabe uboshwe umyalo wakhe? Lokhu kuyaxaka kakhulu, futhi empeleni kuyaphikisana nesimangalo sami esivela kukholomu yangaphambili yokuthi kudingeka isici sangaphandle esizonikeza u-de Dicto ukufaneleka komthetho.
Ngicabanga ukuthi kungaba kuhle ukusho ukuthi uNkulunkulu akazinikele ngempela ekuziphatheni, kodwa uyakhetha. Akakhethi ukuthi ukuziphatha kuyini (ngoba kuyizibalo eziphelele neziqinile ezingekho ezandleni zakhe) kodwa ukhetha ukujabulisa nokufuna ezidalweni zakhe ukuziphatha. Lokhu kufana nesimangalo sami kukholomu yangaphambilini ebheke ku-Ari Alon, ukuthi umuntu angazishaya umthetho ukuthi unokuziphatha noma cha, kodwa akakwazi ukumisa imithetho yokuziphatha ngokwabo (ichaza ukuthi yini enhle nokuthi yini embi). Uma kunjalo, bobabili umuntu noNkulunkulu baboshwe yimithetho yokuziphatha. Incazelo yokuhle nokubi iphoqelelwa phezu kwabo futhi ayinikezwa bona. Kodwa uNkulunkulu angayala ukuziphatha kahle futhi ngaleyo ndlela anikeze lezi zincazelo amandla abophezelayo kithi, futhi umuntu ngeke akwazi ukwenza lokho.
Manje ngizongeza elinye izinga esithombeni. Kunzima ukukhuluma ngokuqhubekela phambili kwesikhashana kwamaqiniso okuziphatha (izincazelo zokuhle nokubi) kuNkulunkulu, njengoba Yena ubelokhu ekhona. Ngaphambi kwakhe kwakungekho lutho ngoba asikho isikhathi ngaphambi kwakhe. Alikho futhi alinakuba khona izwe, ngisho nelokucatshangelwa, lapho uNkulunkulu engekho khona. Kodwa ngokwethiyori kungase kube nomhlaba lapho uNkulunkulu engayaleli khona ukuziphatha (ngaphandle uma sicabanga ukuthi isimo sakhe esihle siyamphoqa ukuba enze okuhle futhi afune inzuzo). Phawula ukuthi manje sesifundile ukuthi ukuziphatha kahle kuyandulela umyalo waphezulu, kodwa hhayi uNkulunkulu. Imayelana nenqubekelaphambili yesikhashana. Kodwa ngezinga elifanayo kukhona futhi phambili okukhulu.
Amaqiniso okuziphatha awancikile emyalezweni kaNkulunkulu, futhi awawona umsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa namanje ayisekho incazelo yokuthi ukuziphatha kukhona noma ngaphandle kukaNkulunkulu. Uma sicabanga ukuthi uNkulunkulu nguye okudingekile ukuba khona kwakhe (futhi lapha ngikhuluma ngoNkulunkulu wenkolo, hhayi "obuthakathaka" ovela kukholamu edlule), ngakho-ke akunakwenzeka ukukhuluma ngeqiniso lapho kukhona khona ubukhona obudingekayo. lokho akukho. Ngakho-ke noma ngabe ukuziphatha (noma amaqiniso okuziphatha) kukhona ngaphandle komyalo angeke kushiwo ukuthi kukhona ngaphandle kukaNkulunkulu. Nakuba kokubili kukhona ngokufana, amaqiniso okuziphatha awanciki ngempela kuNkulunkulu.
Kodwa manje singase sikwazi ukufinyelela encazelweni ethe ukuhluka kancane: amaqiniso okuziphatha ayithambo lobuyena bukaNkulunkulu (ngokwezwi nezwi “imvelo enhle ukwenza okuhle” ngokwezwi nezwi), akhona njengoba ekhona, futhi njengoba ekhona futhi ngaso sonke isikhathi. zikhona ngempela futhi njalo. Futhi nokho ukuba semthethweni kwazo akuwona unomphela futhi akudingekile. Abanawo amandla okubabopha ngaphandle kokuyalwa ukuba benze kanjalo.
Phakathi kokukhonza uNkulunkulu no-Asheri akuzange kusebenze
Ekuqaleni kwekholomu ngagcizelela ukuthi umqondo kaNkulunkulu okuxoxwe ngawo kule kholamu akuyena uNkulunkulu “onciphile” ovela kukholamu edlule (uNkulunkulu odingekayo ukuze anikeze ubuqiniso bemithetho yokuziphatha namaqiniso okuziphatha). Uzokubona lokhu lapho ubuyekeza futhi iziphakamiso ezihlukahlukene eziye zavela lapha mayelana neqiniso lokuthi kunesidingo esihlala sikhona, futhi mayelana neqiniso lokuthi amaqiniso okuziphatha mhlawumbe ayingxenye yamandla ayo nokuthi kungokwemvelo ukwenza okuhle. futhi nokuningi. Lezi zonke izengezo "ezenza" kancane "zikhuluphale" into "encane" kanye ne-minimalist engikhulume ngayo kukholamu edlule.
Lokhu kungenxa yokuthi ingxoxo ekukholomu yamanje yenzeka ngokuphelele emkhakheni wesayensi yezenkolo, hhayi nje lowo we-meta-ethical. Eqinisweni, i-Othipron dilemma ngokwayo iyingxenye yesayensi yezenkolo. Ngaphandle kwemfundiso yenkolo bekungeke kube yinkinga ukusho ukuthi uNkulunkulu uchaza imithetho yokuziphatha (ngoba besingekho isidingo sokuthatha ngokuthi inkulumo ethi muhle iwukuphikisana ngaye hhayi incazelo), khona-ke inkinga ibingeke ibe nayo. kudaliwe. Ngaphezu kwalokho, ekubaleni kwefilosofi kwakungekho ukuphikisana emazwini ami kukholamu edlule. Uma uNkulunkulu echaza okuhle nokubi (amaqiniso okuziphatha) kusho ukuthi kuhambisana ngokuphelele nalokho engikuphikisa kukholamu edlule, futhi besingekho isidingo sayo yonke le kholomu. Inhloso yami lapha bekuwukuvumelanisa isimangalo sami se-meta-ethics esivela kukholamu edlule noNkulunkulu wendiza yezenkolo (umJuda-ubuKristu) okucatshangwa ukuthi muhle. Lena yingxoxo ecacile yezenkolo (hhayi eyokukhuluma ngemfundiso yenkolo).
Inkinga ye-Othipron mayelana namagugu enkolo
Izikhathi eziningi esikhathini esidlule ngike ngaveza umehluko phakathi kwezindinganiso zenkolo nezindinganiso zokuziphatha (bheka isibonelo ikholomu 15, Isiqalo sencwadi yami Uhamba phakathi kokuma Nokunye okuningi). Isixazululo engisiphakamisayo sokungqubuzana phakathi kwe-halakhah nokuziphatha silele eqinisweni lokuthi lezi yizinhlelo ezimbili ezizimele zenani. Umthetho X ungenziwa ngokungalungile (ngoba ukhuthaza ukubaluleka kwezenkolo A), kodwa ngesikhathi esifanayo wenqatshelwe ngokokuziphatha (ngoba ukhubaza ukubaluleka kokuziphatha B). Izindinganiso zenkolo azilungile, futhi ngezinye izikhathi zingama ngokuphambene kakhulu nezindinganiso zokuziphatha futhi ngezinye izikhathi kuphela esimweni sokungqubuzana (lapho ukungqubuzana kuphakama ezimweni ezithile kuphela). Ukuphikisana kwami ​​​​ukuthi asikho isithiyo kulokho kuphikisana, futhi empeleni kulungile ukusho ukuthi lokhu akukhona ukuphikisana (abukho ubunzima ezingeni lethiyori ezimweni ezinjalo), kodwa izingxabano (kunzima ukunquma ukuthi yini okufanele uyenze. yenza ezingeni elingokoqobo).
Ngemva kwalokhu, uTirgitz wabuza umbuzo olandelayo (bTalkback Kukholomu edlule):
Lokhu kusho ukuthi kukholamu elandelayo uzophinde ubhekane ne-euphron mayelana nezindinganiso zenkolo nezinye izindinganiso, ngokubona kwakho eziyizindinganiso ngenxa yalokho u-Gd azivumela ukuba asuse noma yisiphi isibopho sokuziphatha. Futhi lokhu kusho ukuthi ngisho noNkulunkulu akazange azenzele yena ngokuzenzela.
Ngizowuchaza umbuzo wakhe. Ngokwendlela yami, uNkulunkulu usiyala ukuba sibe nemithetho emelene nokuziphatha ukuze sithuthukise izindinganiso zenkolo. Uma kunjalo, u-Tirgitz uthi, kubonakala sengathi izindinganiso zenkolo nazo ziphoqelelwe kuye futhi aziwona umphumela wentando yakhe engafanele (umthetho wakhe ozimele). Ukube imiyalo yayingewona “amaqiniso angekho emthethweni” abekwe kuNkulunkulu kodwa yayidalwe ngomthetho Wakhe, ubengawenza ngendlela ehlukile. Esimeni esinjalo ngingalindela ukuthi uma efuna (futhi azuze njengefa) enze okuhle angashayeli imithetho ephikisana nokuziphatha. Ukuba khona kokungqubuzana kubonisa ukuthi imithetho ye-halakhah (noma izindinganiso zenkolo, ezikhuthazwa yona yimithetho ye-halakhah) nayo iphoqelelwa ku-Gd, ngakho-ke uyabanjwa (noma uyasihlukumeza) ngenxa yesidingo salokhu kungqubuzana.
Umbuzo omkhulu lona, ​​futhi ngicabanga ukuthi uqinisile. Njengoba nje kunamaqiniso okuziphatha akhona namaqiniso we-halakhic. Lezi nalezo azincikile kuNkulunkulu futhi ziphoqelelwe Kuye. Ekuqaleni kwencwadi yesithathu ku-trilogy ngase ngizoqhathanisa isithombe se-Kantian sokuziphatha okuhle njengokuhlonipha ukuhleleka kwezigaba nesithombe se-halakhic engisinikezayo sokwenza i-mitzvah njengokuhlonipha ukuzibophezela emyalweni. Lapha siyabona ukuthi lesi sifaniso sisaqhubeka.
Lokhu kungiletha komunye umbuzo kaTirgitz, obuzwe ezinsukwini ezimbalwa ezedlule (bheka ingxoxo eqhubekayo emculweni Lapha). Esimeni sokuziphatha kuvamile ukucabanga ukuthi ezimweni zokungqubuzana phakathi kwamagugu, khona-ke noma ngabe nginesizathu sokwenza u-X futhi ngidlule u-Y, kusekhona inkinga engidlule phezu kuka-Y. Kufanele ngizwe ukudabuka noma ukudabuka ukulimaza umuntu noma ukwenza into engcolile, ngisho noma kufanele ngenze lokhu. U-Tirgitz ubuze ukuthi usizi olunjalo kufanele luvele yini kumongo we-halakhic (Q.)kukhulunywa: "Usizi lwakho nosizi kimi"). Okungukuthi, kufanele yini ngizisole ngokuthi ngenxa yokuthi ngangihileleke emitzvah angizange nginyakaze lulav (noma ukuthi ngenxa yokuthi ngangigula angizange ngizile ukudla ngo-Yom Kippur), njengoba nje ngizisola ngokuthi ngenxa yokuthi ngaya empini kwadingeka ngibulale. abantu (futhi ngezinye izikhathi izakhamuzi). Ngamafuphi, umbuzo wakhe uthi ngabe ukhona yini umehluko phakathi kwe-halakhah nokuziphatha kulolu daba.
Ngamphendula lapho ukuthi ngicabanga ukuthi kunomehluko phakathi kwezimo: esimweni sokuziphatha ngisho noma inani elithile lenqatshwa phambi kwelinye inani, kufanele ngibe nosizi noma ngididekile ngenxa yokweqa inani elaliwe (ngilimaza umuntu) . Ngakolunye uhlangothi, ku-halakhah uma singekho isibopho futhi ngenze lokho okwakufanele kimi asikho isizathu sokuzisola ngalokho engingakufezanga. Kuvunyelwe ngokuphelele futhi akekho olinyazwayo.
Kodwa lo mehluko uthatha ngokuthi ku-halakhah kunomyalo kuphela futhi lapho ungekho umyalo akwenzekanga lutho. Kodwa ngenxa yesithombe esivela lapha kubonakala sengathi ngidinga ukubuyela kimina kulo mehluko. Uma sicabanga ukuthi umyalo we-halakhic weza ukuzothuthukisa izindinganiso zenkolo, khona-ke noma ngabe ngephule i-halakhah ngokufanelekile (ngenxa ye-halakhah eyawenqaba), noma kunjalo into ethile emhlabeni kamoya yalinyazwa yiyo (ngenza ngokuphambene neqiniso le-halakhic futhi kwaletha ukulimala ngokomoya). Kubonakala sengathi isithombe engisethulile lapha sikhombisa ukuthi ngempela awukho umehluko phakathi kwe-halakhah nokuziphatha kule ndaba.
Nakuba ngokuqhubekayo kungaphikiswana ngokuthi uma ngenza okuthile okuvunyelwe, khona-ke umonakalo ongokomoya wawugwenywa (bheka Imibhalo Ku-citric acid ngePhasika, lapho ngilethe khona imithombo ebhala kanjalo). Kungashiwo ukuthi uNkulunkulu wenza isimangaliso futhi avimbele umonakalo ukuze kungabikho okubi ngomuntu olungileyo njengami othembekile emthethweni. Lokhu vele akwenzeki endizeni yokuziphatha. Lapho ngisho noma kwakudingeka ngilimaze izindinganiso zokuziphatha, umonakalo awunakugwenywa. Umehluko usukela eqinisweni lokuthi esimweni sokuziphatha lawa amaqiniso angokwenyama futhi esimweni se-halakhic lawa amaqiniso angokomoya. UNkulunkulu akayishintshi i-physics ngoba akagxambukeli ekuziphatheni komhlaba wenyama, kodwa ushintsha amaqiniso kamoya (ngoba emhlabeni kamoya uyagxambukela. There is not mechanically conduct). Kubalulekile ukuqaphela ukuthi nakuba sibonile amaqiniso okuziphatha akusiwo amaqiniso aphathekayo, ancike emaqinisweni aphathekayo (ukulimala noma ukuhlupheka kumuntu ngokwesibonelo). Isibonelo, uma ngintshontshe imali yomuntu ukuze ngisindise impilo, khona-ke noma ngabe kuvunyelwe futhi mhlawumbe ngisho ne-mitzvah, umonakalo wesela wenzeka futhi asikho isizathu sokuzisola (lapha ngeke kwenzeke isimangaliso ukuthi uNkulunkulu uzobuyisela imali kuye).
Okushiwo kuzoba ezimweni njengoba ngichazile kukholamu edlule, lapho ukuhleleka kwezigaba kungitshela ukuthi akumele ngenze u-X nakuba ungenayo imiphumela engemihle. Ezimweni ezinjalo kubonakala sengathi uma into yenqatshwa ngenxa yelinye inani akukho okumele uzisole. Lokhu kufana nesimo se-halakhic sphere. Isibonelo, ake sithi ngiphakamisa intela ye-NIS eyinkulungwane ukuze ngisindise impilo yomuntu. Esimeni esinjalo angizisoli ngalutho ngokugwema ukukhokha intela njengoba kungenamphumela omubi (ngikuchazile lokhu kukholamu edlule). Ngale komphumela oyinkinga ongekho, okukhona lapha kuwukweqa kuphela uhlelo lwezigaba, kodwa lokhu kwakufaneleka kulezi zimo. Eqinisweni, kunembile kakhulu ukusho ukuthi angizange ngiphule umyalo wesigaba nhlobo esimweni esinjalo. Umthetho jikelele uthi wonke umuntu kufanele abalekele intela ukuze asindise impilo.
 Kukholomu edlule ngichazile ukuthi kungani umthetho wokungqubuzana njengesimangalo sokuhlaziya okunengqondo ungadingi ukuthethelelwa. Lona umbono ofanayo ovela endaweni ethe ukuhluka kancane.
 Cabanga ngombuzo othi uNkulunkulu angadala yini udonga olumelana nazo zonke izinhlamvu kanye nenhlamvu engena kuzo zonke izindonga. Impendulo yalokhu ithi negative, ngoba uma ibhola alidalile lingena kuzo zonke izindonga kusho ukuthi alukho udonga olumelana nalo, ngakho-ke alukho udonga olumelana nawo wonke amabhola, futhi ngokuphambene nalokho. Ukungakwazi kukaNkulunkulu ukudala izinto ezimbili ezinjalo ngesikhathi esisodwa akuliphazamisi ikhono lakhe. Ngokulula nje ezingeni elinengqondo alikho iqiniso elinjalo. Bheka Lapha Okushiwo umbuzo itshe ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukuphakamisa, futhiLapha Embuzweni wobubi bemvelo (bheka futhi incwadi yesibili ku-trilogy yami esahlukweni seshumi).
 Isiphetho siwukuthi okuhle (ukushaya ikhwelo) kwakhe kuhlukile kokwethu. Akanayo imithetho ebophayo ayilalelayo, kodwa uyena oyenza ibe semthethweni. Umuntu uboshelwe yi-oda lesigaba elinikezwe ubuqiniso bayo, ngakho-ke kufanele kuthathwe isinqumo sokusebenza ngokuhambisana nayo. UNkulunkulu, ngakolunye uhlangothi, akazibophezeli, kodwa ukhetha ukukunikeza ukuba yiqiniso. URamchal uzothi imvelo yakhe ukwenza okuhle.
 Ekuqaleni kwekholomu 278 Ngike ngaxoxa ngomqondo we-nehma dhakisufa, futhi kubonakala kimi ukuthi ingxoxo lapho nayo iyawuphendula lo mbuzo.
 Bona izindatshana zokuhleleka kwezigaba ku-halakhah, okubonisa ukuqhubeka kwesifaniso phakathi kwe-halakhah nokuziphatha, kodwa kulokhu kuthinta okuqukethwe hhayi isakhiwo esinengqondo. Lapho ngiphikisa ukuthi ukuhleleka kwezigaba kunesimo se-halakhic.
 Ngizoletha lapha umcabango wokuqala osadinga incandescence. Ngicabanga ukuthi kukhona umehluko phela. Esimweni sokuziphatha kukhona ukuzibophezela ezimisweni zokuziphatha, kodwa ku-halakhah kukhona kokubili ukuzibophezela ezimisweni zenkolo kanye nesibopho sokulalela umyalo ngenxa yokuba umyalo waphezulu (kungakhathaliseki ukuthi ukhuthaza futhi izindinganiso zenkolo. ). Umcabango lapha uthi ekuziphatheni awukho umyalo waphezulu kodwa kuyintando kaNkulunkulu kuphela ukuthi senze ngale ndlela. Uhlelo lwesigaba alunaso isimo se-mitzvah ngaphakathi kohlaka lwe-halakhah (yize ngithi sinesimo se-halakhic. Bona izindatshana zami Lapha).
Futhi kulandela ukuthi uma ngingazili nge-Yom Kippur ngenxa yokuthi ngiyagula, ubukhulu bomyalo abukho ngempela, ngoba umyalo esimweni esinjalo uwukudla hhayi ukuzila. Ngakho kulokhu ukudla akukho okubi okwenzekile futhi akukho lutho lokuzisola. Ngakolunye uhlangothi, esimweni sokuziphatha, ngisho noma inani elithile lenqatshwa ngokufanelekile, isibopho sokuziphatha sokuligcina lihlala lifana (ngaphandle kokuthi angeke lilalelwe. Eqinisweni, ngiphikisa ukuthi ekungqubuzaneni kokuziphatha kuhlale 'kwenqatshwa. ' futhi 'akuvunyelwe'). Kodwa ku-halakhah kukhona nobukhulu obulandelanayo (ukulungiswa okudalwe kusukela ku-mitzvah kanye nokuchithwa kwecala), futhi mayelana nalokhu kubonakala sengathi kukhona ukufana nalokho esikubonile esimweni sokuziphatha. Kuhlobene nomehluko phakathi kokuba khona kwe-de dicto kanye nokuba khona kwe-de re, njalonjalo.
 Bheka inothi ku-bImibhalo Ekujezisweni kukaHalacha eSahlukweni D, lapho ngaphuma khona ngokumelene nezindlela zokusebenzisa imishini ekujezisweni kwezulu.
Phendula esikhalweni esithi "Ubani odale uMdali".
80 Imicabango kokuthi “Ukubuka Inkinga Ye-Othipron Ekukhanyeni Kwenkulumo-mpikiswano (Ikholomu 457)”
Umbelethisi uyazisola ngokuthi wavinjwa ukuthi azile ukudla eYom Kippur. Ngokuya ngempoqo ihlanganiswa ngokuphelele - ikhululiwe. Ngokuphambene, umyalo wokuqondisa umphefumulo nomphefumulo udlula kakhulu. Kodwa uyaxolisa, nakuba azi kahle ukuthi umyalo wakhe okwamanje uwukudla, ngoba akazange azilwe. Akanalo usuku lokuzila ukudla, lokuhlanzwa nokubuyisana. Ingabe uzoyichitha le mizwa njenge-Afra Daraa, futhi uyichithe ngezaba 'zesayensi yengqondo' - izimpikiswano ongazicabangi? Noma ingabe kukhona enye into lapha efana ngandlela-thile nosizi lokuphuthelwa kokuziphatha?
Ngiluqonda ngokugcwele lolu sizi, futhi ngicabanga ukuthi ngokuqinisekile lunayo indawo. Engixoxile ngakho umbuzo wokuthi ngabe kukhona intshisekelo / isibopho (hhayi i-halakhic) sokuzisola. Ngamafuphi, ngibhekene nezinga elijwayelekile kunelengqondo. Uma abantu behlulwe umdlalo webhola bayaxolisa, ngeke yini ube umfundisikazi njengomgcini wendlu yezihambi?!
Angibuzanga ukuthi uyaluqonda usizi, ngaphandle uma ubona kulo inani eliseduze noma elifana nokulahlekelwa ukubaluleka kokuziphatha. Akufanele uphuthelwe wumdlalo webhola lezinyawo.
Hhayi ngezinga elifanayo, uma kunjalo. Ngokwalokho engikubhale kukholamu, ngicabanga ukuthi uNkulunkulu uvimbela umonakalo ongokomoya uma othile enza ngokusemthethweni, akukho okwenzekayo. Futhi uma ezisola ngokulahlekelwa kwakhe (ukulahlekelwa ulwazi) - lokhu kuyilungelo lakhe kodwa akunalo ngempela inani. Mhlawumbe iveza uhlobo lweYarosh kwazise usizi lukhombisa ukuthi izinto zibalulekile kuye. Kodwa usizi olungokokuziphatha lungokuthile okungaphezu kokushiwo ukuthi ukubaluleka kubalulekile kuye. Isimangalo sokuthi kukhona okuyinkinga ngempela okwenzeka lapha, ngaphandle kokuthi anginacala. Esimeni se-halakhic akukho okuyinkinga ekwenzekile. Kakhulu ulahlekelwe ulwazi.
Ngicabanga ukuthi abukho ubufakazi beqiniso lokuthi kunemibuzo ngokuziphatha ngoNkulunkulu yokuthi ukuziphatha kuphoqelekile kuye.
Le mibuzo ithatha kuphela ukuthi uNkulunkulu ukhethe umyalo wokuziphatha njengomgomo ophakeme, ngakho-ke ubuze ukuthi angaziphikisa kanjani.
I-Sharpener - umbuzo uyacacisa futhi awungqubuzani. Okungukuthi, kuyamcacela ukuthi kukhona ukulungisiswa kokuziphatha kwalokhu, njengoba ethatha ukuthi ukuziphatha kuyisimiso esinqunyiwe isisu esikhethiwe.
Bengingacabangi ukuthi ushayisane. Ngaphandle kwalokho, uma kukuhle, khona-ke ugqozi alubalulekile. Kodwa ngicabanga ukuthi uyaphuthelwa ingoma yale mibuzo: uyethula njengemibuzo enengqondo (mayelana nokuhambisana kwayo), kodwa le mibuzo inezimiso zokuziphatha. Kunjengokungathi u-Abrahama owayala ukulalela indodana yakhe wayezomangala nje ngokuvumelana kukaNkulunkulu owathembisa ukuthi u-Isaka wayezombiza ngenzalo, futhi angawunaki umbuzo wokuthi uNkulunkulu angayala kanjani into enjalo. Kuwe le mibuzo emibili inengqondo efanayo. Lokho akukhona okushiwo izimbongi.
Ngokuqondene nombuzo kaTirgitz - lona umbuzo omuhle ngempela, ngoba umuzwa uwukuthi iHalacha ihlukile emisebenzini yokuziphatha (njengoba nje uMaimonides ehlukanisa phakathi kwemiyalo yengqondo neyokuzwa, njll.). Enye indlela yokukuchaza lokhu ukuthi u-Gd ungaphansi kweqoqo likamoya eliphelele esingakwazi ukulifinyelela - futhi umbuzo uyobuzwa ngokwemvelo - uma u-Gd engaphansi kwesethi yemithetho emisiwe, ngokusobala leli sethi lemithetho. ungumuntu ophakeme, uhlobo luka-Spinoza uNkulunkulu Hhayi umuntu siqu futhi ongenandaba, kodwa emhlabeni "wemvelo" ongewona ongokwenyama. Kimina kubonakala sengathi umbuzo wokuzithoba kukaNkulunkulu emithethweni ubuthakathaka kakhulu ekubeni ungekho endabeni yemithetho enengqondo, njengoba uchaze (ukuthi “ayiyona “imithetho”), futhi unamandla kancane endabeni yemithetho yokuziphatha. , ngoba uke waphikisana - kancane kancane kodwa isimangalo engingakwamukela - ukuthi ziyadingeka ngendlela efanayo. Kodwa uma kuziwa emithethweni ye-halakhic kuba nzima ukwamukela, ngokubona kwami. Ngenxa yokuthi isidingo sabo sihilela ukudala umhlaba lapho kudingekile khona, kubonakala sengathi, futhi ebusweni kubonakala kungenasidingo (impikiswano iwukuthi bayadingeka ezingeni eliphezulu kakhulu, kodwa namanje akunakwenzeka ukuziqonda - okuyinto ephuthumayo enkulu; ngaphandle uma umhlaba wadalwa kanye nale mithetho Ubunzima ukucindezela). Lokhu kuyiqiniso futhi ngemithetho yokuziphatha ("" Imbangela ubuhlungu bubi "yisimangalo esibalulekile kuphela emhlabeni lapho kukhona ubuhlungu - futhi umbuzo omkhulu ukuthi kungani uNkulunkulu adala ubuhlungu emhlabeni hhayi ukuthi kungani esho akufanele kubangele ubuhlungu), nokho ngandlela thize kubonakala kunamandla emhlabeni engaya lapho imithetho ibonakala ingenangqondo. Kunoma ikuphi, kubeka uNkulunkulu ezweni elandulelayo futhi elingenalo igunya phezu kwakhe. Kodwa-ke, kunenye indlela ecatshangelwayo yokubhekana nalo mbuzo, engingazi ukuthi ngicabangani ngawo - ukusho ukuthi uNkulunkulu angakhetha izwe lapho kuphela imithetho yokuziphatha efanelekile njengomsebenzi womuntu, futhi angakhetha. izwe lapho le mithetho ngokwayo yenqatshwa ngokumelene nezinye izindinganiso.Yayo ingaba yinoma yini futhi ingaphansi kokukhetha kwakhe. Futhi wakhetha ukukhetha kwesibili ngoba ngaphandle kwesimo esinjalo, sasingeke sibheke lemithetho, yayizicacele yona ngokwayo (njengoba uMaimonides ebhala ngomuthi wolwazi nodoc). Ngokwalokhu kungenzeka - ukuba khona kwezwe le-halakhic eliphikisana nemithetho yokuziphatha ngezinye izikhathi kulungisiswa ngesizathu esithile sangaphandle, akudingekile, futhi akudingi izwe lonke lemithetho uNkulunkulu angaphansi kwayo. Ngakolunye uhlangothi, njengoba kushiwo, sona kanye isinqumo sokudala umhlaba onjalo singabonakala singabazekayo.
Angizange ngikuqonde isimangalo. Ngizophawula kuphela ngamaphuzu amabili emazwini akho (engethemba ukuthi ngiwazwisisile):
1. Imithetho ayisebenzi. Incazelo yokuhle nokubi ayikho ngempela lapho kodwa mhlawumbe iqiniso. Ngakho-ke akukho okungakhulunywa ngombuzo wokuthi baphakeme kunoNkulunkulu noma cha.
2. Ngisho nemithetho yokuziphatha iyimithetho emhlabeni wethu kuphela. Uma ngabe kwadalwa omunye umhlaba owawuhluke ngokuphelele ngezidalwa ezakhiwe ngendlela ehluke ngokuphelele (zazingenalo usizi nokuhlupheka), ngabe neminye imithetho iyasebenza kuwo. Kodwa uma kuyimithetho yokuziphatha, lokhu kwakuwukusetshenziswa kwaleyo mithetho yethu yokuziphatha kulezo zimo. Yilokhu kanye okuchazile mayelana ne-halakhah, ngakho-ke kubonakala sengathi awukho umehluko.
Amadodana akhe u-Yitzhak Koren
“Zonke izicelo zomazisi zohlobo: a ngu b. Ukucabanga ukuthi lesi simangalo silungile, kusho ukuthi: a is a, okusho i-tautology engenalutho. ” - Nginenkinga yokuthola inkinga lapha. Uma sicabanga ukuthi lesi simangalo silungile, kuyalingana ngokunengqondo ukufuna u-A = A, kodwa futhi ukufuna u-1 + 1 = 2 kanye nanoma yisiphi esinye isimangalo esilungile. Uma incazelo yomusho iwulwazi olungezayo, awukho umusho "osho ukuthi uyiqiniso." Uma sithatha / sazi ukuthi kuyiqiniso, ukusho futhi ukuthi kuyiqiniso akwengezi ulwazi kithi, ngakho-ke akubalulekile.
Futhi ngamanye amazwi: unencazelo hhayi ukufundisa.
Inkinga ye-Uthron enhle ngeyezithombe, okungacaci kahle ukuthi zihlotshaniswa kangakanani nokuziphatha. Kunalokho, ngokwezindaba zezinganekwane kuyacaca ukuthi zigcwele umona namandla.
Ngokuphambene, uNkulunkulu ka-Israyeli ungumthombo weqiniso nomthombo wokuhle. 'Akakho ngaphansi' kokuziphatha neqiniso. Uyiqiniso nokuziphatha ngobumsulwa babo obuphelele. Thina njengabadali ukuthi ulwazi lwethu luyimvuthuluka encane. Sazi kancane ngezinzwa zethu, izinzwa zethu kanye nokutadisha kwethu, kodwa esikwaziyo imvuthuluka encane evela esithombeni esiphelele, uMdali womhlaba kuphela owaziyo ngokuphelele futhi nguye kuphela owaziyo injongo yawo.
Ubunzima bethu bokuziphatha ngezindlela zoMdali bufana nobunzima bomntwana ongaqondi ukuthi kungani uyise eshaya isandla sakhe lapho nje ezama ukunamathisela isando emshinini kagesi, futhi engaqondi ukuthi kungani uyise enikelwe esandleni. inqwaba yamatshe amhlophe anonya ikhipha imibese iklebhula inyama yomfana onebhadi.
Ngokuqondene nabazali abangabantu, kakade siye saba nelungelo lokuqonda ukuthi ukushaywa kwesandla kwafika ukuze kusindise ingane ekubanjweni kukagesi, futhi 'abadonsa imimese begqoke amajazi amhlophe' benza umntwana ukuhlinzwa okusindisa ukuphila. Ikakhulukazi njengezenzo zoMdali wezwe, owathatha isintu amakhulu eminyaka ecwaninga ukuze aqonde kancane ukujula kwazo - ukuthi sivunyelwe ukunikeza 'udumo' oluthile kuMdali wethu, ukuthi ukuhlupheka nokuhlushwa uyena. usiletha kukuhle kithi, ukusilungiselela ephaseji.'Lounge', futhi usazise ngezinhliziyo zethu' ukuthi uma ubaba ehlukumeza indodana yakhe 'u-Elkich uyakuhlupha'
'Isimilo sikayihlo' 'nezimfundiso zikanyoko' - ukwamukela ijoka noma ukuqonda nokuchazwa?
Uma uMdali enobuntu obuphelele phakathi kwentando yakhe nenhloso yakhe, umuntu angaba negebe phakathi kokuzwa kwakhe okuhle nokulungile neziyalezo azithola kuMdali wakhe. Futhi leli gebe aligcini nje ngokuthi 'lingenzeka' kodwa liyadingeka, kodwa liyancishiswa inqobo nje uma umuntu ejula futhi eqonda ngokwengeziwe intando ka-Kono.
Uma sibheka, umuntu angase aneliswe ukwamukela ijoka ngenxa yokuqiniseka ukuthi uMdali wezwe wenza ngokwahlulela ngisho noma umuntu engaqondi, kodwa lokho akwanele. Ngoba umuntu akufanele abe 'isigqila' esiqotho ku-Kono kuphela, kodwa futhi 'umfundi' okwaziyo ukuchaza intando ka-Kono ngisho nasezimeni lapho engatholanga khona iziyalezo ezicacile.
'Esigqileni' kwanele ukubiza 'yenza kanjalo' noma 'yenza kanjalo'. Ngeke athathe isinyathelo ngaphandle kokuthola imfundo ecacile, kodwa ukuze abe 'umfundi' owaziyo ukuqondisa intando karabi wakhe ngisho nalapho kudingekile 'ukuqonda okuthile kokuthile', kufanele kube nokuqonda incazelo yezinto, angasebenzisa ngazo izimiso.
Kuze kube manje, kwanikezwa iTorah ebhaliwe eyayishiwo phezulu ngegama elithi 'iqoshwe ezibhebheni', kodwa futhi kufanele ibe 'iTorah yomlomo' efuna ukuqonda ukunambitheka nengqondo yemithetho yeTorah, kanye nokuqonda ukujula kweTorah. Imithetho yeTorah - umuntu angamunca umoya wezinto.
NgeTorah yomlomo ecacisa umthetho wenkululeko - umuntu uyazikhulula 'enkingeni ye' Yifron ', njengoba intando yoMdali eyaqala ngokuthi' ukwamukela ijoka langaphandle' - iba 'iTorah Delia' nge akuqondayo futhi akhombe.
Ozithobayo, u-Enoch Hanach Feinschmeker-Felti
“Kepha lapho isono [umuntu esihlahleni solwazi] sijeziswa ngokuphucwa ukuzuzwa kwengqondo okufanayo… futhi ngenxa yalokho kuthiwa ‘naba njengoNkulunkulu wazi okuhle nokubi’ futhi ningasho ukuthi ‘abazi amanga neqiniso’ noma 'abazuza amanga neqiniso'.
Futhi ezintweni ezidingekayo akukho okuhle nokubi nhlobo ngaphandle kwamanga neqiniso ”(Mon., Ingxenye I, P.B.)
Mhlawumbe uMaimonides lapha futhi ukhuluma ngamaqiniso okuziphatha futhi ugwema inkinga ye-Eitipron?
Bheka ikholamu 177 lapho engachaza khona ukuthi lokhu kuwukuzithoba hhayi ukuziphatha kahle.
Ngiyabonga ngereferensi, ngifundile, kungenzeka angizange ngiqonde, kodwa angizange ngibone inkinga ngamazwi kaMaimonides.
Kubonakala kimi ukuthi umusho kufanele uhlukaniswe kabili:
"Futhi wawufana noNkulunkulu owazi okuhle nokubi" - lokhu kumayelana nokuqwashisa okuye kwathuthukiswa kuwe ngosaziwayo, abahle namanyala, okuhle noma okubi. Ngakho manje ukuziphatha kahle nakho kubonakala kuwe kukuhle nokubi.
“Futhi [leli vesi] alizange lisho amanga neqiniso noma labo abazuza amanga neqiniso, futhi ezintweni ezidingekayo akukho okuhle nokubi nhlobo ngaphandle kwamanga neqiniso” - lapha uMaimonides usho ukuziphatha. Okusho ukuthi, ngalo mqondo usumfulathele uNkulunkulu futhi walahlekelwa amandla obuhlakani obunawo ngaphambili okubona isimilo esigabeni sangempela-sobuNkulunkulu esiyiqiniso namanga.
Kufanele ifundwe njengombuzo nempendulo - futhi kungani leli vesi lingashongo "amanga neqiniso"? Phendula - ngoba ulahlekelwe. Kodwa niyokwazi ukuthi ngempela, kuNkulunkulu, izinto ezidingekayo (ukuziphatha) azilungile futhi zimbi kodwa zingamanga futhi ziyiqiniso. Futhi lapha inkinga ye-Eitipron ingaphezu kwamandla.
Angisawakhumbuli ngokuqondile amagama, kodwa ngabona ukuthi kwakuphathelene nenhlonipho kuphela hhayi ukuziphatha kahle. Kunoma yikuphi, ngisho noma uqinisile ukuthi kunesitatimende esithile ku-Maimonides, akuyisusi inkinga ye-Eitipron. Ngokuvamile ungase uphikise ngokuthi uMaimonides wayenombono wakhe siqu kule nkinga.
Ukuziphatha-ububele noma ukuvimbela ukuziphatha?
Ku-SD ACH Tov ku-Adash XNUMX
Umehluko awukho phakathi 'kwenkolo' kanye 'nokuziphatha' kodwa phakathi 'kokuziphatha kozwelo' kanye 'nokuziphatha kokuvimbela'. Ngakolunye uhlangothi, uDetersh unesimilo sokuvimbela ukulethela isoni impindiselo enonya ezokhipha kusoni sesikhathi esizayo wonke u-'oh amen' wokuphindaphinda kobugebengu.
Lapha sidinga 'isimiso saphezulu' esizonikeza isilinganiso esifanele esizoletha ukulingana phakathi kwesidingo sokuvinjelwa okuphawulekayo nesifiso saphezulu sokuba nesihe nokuvumela ukulungiswa.
Ngakho-ke, isibonelo, ukuvimbela kudinga ukuqeda emsukeni abantu abahlakulela umbono wenzondo nobubi - u-Amaleki nabantu baseKhanani - futhi ngakolunye uhlangothi ububele budinga ukubabiza kuqala ekuthuleni nokubavumela ukuba babaleke 'ngokuguqula indlela' ngokwamukela izimiso eziyisisekelo zokholo nokuziphatha.
Unxantathu oyindilinga yemabula ophakanyisiwe. Kuyinto egcina zonke izici zikanxantathu kanye nazo zonke izakhiwo zendilinga.
Into engunxantathu oyindilinga iyisiyingi yomibili futhi yenziwe ngemigqa emithathu eqondile.
Nakuba lokhu kungqubuzana nengqondo yokuphila kwansuku zonke, ngenhlanhla iqiniso alidansi imisindo yokucabanga kwethu. Ngaphandle kwalokho, ngabe asikho.
Angicabangi ukuthi isithombe osichazile sibonisa ukuthi izindinganiso zenkolo ziphoqelelwa kuNkulunkulu. Ngokuba yilokho ayikho, yena ngokwakhe unegunya elingakwazi ukunquma ukuthi izindinganiso ezithile zenkolo (awadala) zibaluleke ngokwanele ukwenqaba izindinganiso zokuziphatha. Iqiniso lokuthi izindinganiso zokuziphatha ziyabophezela akusho ukuthi zingowokuqala ohlwini lwezinto eziza kuqala.
Kimina kubonakala sengathi awuzange uyiqonde ingxabano yami (noma kaTirgitz). Ngokucabanga ukuthi izindinganiso zenkolo zisezandleni zakhe okusho ukuthi angakwazi ukuzinquma ngendlela afisa ngayo, asikho isizathu emhlabeni sokunquma ukubaluleka kwenkolo okungqubuzana nokuziphatha. Kungani enze lokhu uma ekwazi ukunquma ukubaluleka kwenkolo ngendlela evumelana nokuziphatha? Lokhu kulandela ukuthi izindinganiso zenkolo nazo azikho ezandleni zakhe.
Uma kunjalo bengingaqondi ngempela phambilini, kodwa nalokho akufiki engqondweni ngombono wami, ngenxa yezizathu ezimbili:
1. Kungase kungenzeki ukwakha uhlelo lwenkolo oluhambisana ngokuphelele nokuziphatha (njengokusho kwakho ngokudalwa komhlaba ongenabo ububi). Lokhu akusho ukuthi uphoqelekile kuye, ngoba angakwazi ukuyeka ngokuphelele, ngokungafani nesimo sokuziphatha. Kodwa uma sicabanga ukuthi ufuna ngenxa yesizathu esithile, kumelwe singqubuzane nezindinganiso ezithile zokuziphatha. Cishe ukhethe leyo egcwaliseka kancane, futhi lokhu kubuye kuchaze ukuhlobana okubalulekile phakathi kwezindinganiso zeTorah nezindinganiso zokuziphatha.
2. UNkulunkulu anganxephezela, kuleli zwe noma elilandelayo, noma ubani olinyazwa ngokuziphatha ngenxa yokuba khona kwenani leTorah. Angaqiniseka ukuthi ekufingqweni okupheleleyo izinga lakhe lenjabulo liyoba njengoba kwakufanele libe njalo ngaphandle kwenani leTorah.
1. Ngakho lokho kusho ukuthi kuyamphoqa. Uma ebeka uhlelo ngendlela athanda ngayo akukho mkhawulo pho yini evimbela ukuhambisana nokuziphatha?
2. Ukuthi angakwazi ukunxephezela ishifu kungaba yiqiniso. Kodwa asikho isizathu emhlabeni sokwenza kanjalo. Angakwazi ukubeka lezi zimiso ukuze zivumelane nokuziphatha.
1. Ubeka uhlelo ngendlela athanda ngayo, kodwa lokhu akusho ukuthi kukhona esikhaleni samathuba uhlelo lwezindinganiso zenkolo ezinokwephulwa kwe-0 kokuziphatha. Akakwazi ukusungula noma yiluphi uhlelo lwenkolo, noma akhethe kulezo ezilimaza isimilo okungenani.
Njengoba ayengakhetha ukungawudali umhlaba, kodwa (mhlawumbe) akakwazanga ukudala umhlaba onazo zonke izinzuzo zalomhlaba kodwa ngo-0 ububi. Lokhu akusho ukuthi ukudalwa komhlaba kuphoqelekile kuye, kodwa ukuthi uma efuna (!) Ukudala izwe elinokuzikhethela okukhululekile khona-ke kuyoba khona ububi kuwo.
Awukuqondi lokhu kugcizelela.
Uma ungekho umkhawulo ongancikile kuye, yini emvimbelayo ekunqumeni ukuthi unkosikazi kaCohen owadlwengulwa kufanele ahlukaniswe nomyeni wakhe? Wayengase anqume okuphambene (sinikeze iTorah ngaphandle kwale mininingwane). Yisiphi isithiyo esivimba ukuthi lokhu kungenzeki kuye? Emongweni wobubi, ngachaza ukuthi imithetho eqinile yemvelo ingase ingabi khona ngaphandle kwamaphuzu okuhlupheka nobubi. Alukho olunye uhlelo. Kodwa izimiso zemithetho yenkolo azinazithiyo kuzo. Azinangqondo. Ngakho-ke yini esimweni sezenkolo emvimbela ekunqumeni imiyalo eyishumi nane kuphela ngaphandle komkaCohen?
Rabi Narali, kufanele ubhale ikholomu (noma ubhale futhi angikwazi)
Ngokuphathelene nengxenye ye-halakhah eboshwe ngokoqobo kanye nokuvunyelwa nokwenqatshwa, njll.
[Wenze okungawini njengomnqobi. Ngivele ngizwe into engacacile (kanti iphinde iphume emazwini akho kimi) hhayi ngendlela ebukhali oyicacisile]
Isithombe sibonisa ukuthi akukho mehluko phakathi kwe-halakhah nokuziphatha uma kuziwa ezingxabanweni, kodwa emva kwakho konke, bonke abantu bayaqaphela lo mehluko futhi kufanelekile ukuthatha intuition yabo ngesigamu. Ngisho noma umuntu ezisola ngokulahlekelwa okwenziwe ukuthi akazange ayithole i-mitzvah noma umuzwa okhethekile ohambisana nokuba khona kwayo, angikaze ngizwe umuntu ezisola ngokudlula i-lao ngenxa yokwenqatshwa Endabeni yaseMadin, kukhona ukwenqatshwa okukhulu. , futhi lokhu kusobala ukuthi i-Tza'a), futhi ekuziphatheni, abantu abavamile bayazisola nangokuthi bephule umthetho wokuziphatha, njengokugwema ukuhlenga i-kosher gentile nge-Shabbat.
Ngakho ukuchaze ngombono wokuthi ku-halakhah uNkulunkulu ulungisa umonakalo ongokomoya futhi ekuziphatheni okuhle akalungisi umonakalo ongokwenyama. Kepha iphendula kanjani, khona-ke uma kungekho sidingo sokuziphatha, abantu banendabani ngokulimala ngokomzimba? Ingabe (nami ngokuvamile) akulungile futhi akukho ukungezwani okujwayelekile lapha kodwa umuzwa wokungazi?
Ukuchaza umuntu kufanele angeze ngokusobala ukuthi kuze kube yilapho imiyalo isekhona futhi noma yenqatshwa khona-ke wonke umyalo owodwa uhlala ukhona. Lokhu kusho ukuthi umyalo awuwona umyalo osebenzayo "manje yenza njalo" kodwa umyalo wesimiso, futhi esikhundleni sokungqubuzana kukhona umyalo lapha nomyalo lapha ngakho futhi esikhundleni sokungqubuzana nesinqumo esicacile kunenkinga. (Ngaphandle kokuthi ngokusobala asikho isidingo sokufika nhlobo emaqinisweni ahlukene kamoya).
Futhi lokhu yikho okushiwo uRaqa (ngempela kulotshiwe njengesidingo nokuvuselelwa emkhankasweni wokugubha njengoba nangidlulisela. Angizange ngifunde umkhankaso kodwa ngabona ukuthi uthi uma umuntu eshaya i-shofar ku-Rosh Hashanah ewela ngeShabbat Eqinisweni kodwa isimiso. Angiyiqondi ngempela le nto, ungangichazela yona? (Empendulweni lapho ubhale ukuthi ucabanga kanjalo ngempela). Lo myalo uyisiyalo esisebenzayo, angiyiboni incazelo yokuthi ngakolunye uhlangothi ngiyaleza u-A futhi ngakolunye uhlangothi ngiyaleza u-B futhi empeleni ngiyala u-B.
Awuqondi ukuthi kungani ungaboni usizi ngokulahlekelwa yi-mitzvah. Impela kungokwakho. Njengomuntu ongeyena meme enkantolo ngoba egula. Futhi izindaba ziyaziwa ngorabi abamqinisekisayo futhi bamtshela ukuthi kuwumsebenzi wakhe esimweni sakhe. Ngaphandle kwalokho, ngokwenza lokho akusona isimo esijwayelekile futhi abantu sebesijwayele. Isibonelo esitshalweni soboya nelineni, akekho okhumbula ukuthi kukhona i-shatnaz. Kodwa esigulini e-USSR kuyisimo esingavamile futhi siyaxolisa kakhulu.
Yebo abantu bayakukhathalela ukulimala ngokomzimba nosizi lwabanye. Kuyini okwakho ukuthi ngenze ngendlela efanele. Nokuthi uma umuntu ehlupheka ngenxa yezinhlekelele zemvelo angizisoli. Ngakho uma nginecala ngakho (ngisho noma kufanele) ngiyaqiniseka ukuthi ngiyaxolisa. Hlanganyela abantu beHezi engozini abangasoli ngayo, ngisho nomonakalo uqobo lwayo wumthelela, lungakanani usizi abanalo ngomonakalo abawudalile.
Angisawakhumbuli amazwi ami eniwacaphunayo wokuthi umyalo ukhona, kodwa ngabhala ngawo kabanzi encwadini yesithathu ochungechungeni olunengqondo lweTalmudic. Yonke le ncwadi igxile ekuhlukaniseni phakathi kokuphoqelekile kanye nokufundisa okusebenzayo. Umyalo uwuhlobo lweqiniso, futhi isiyalezo esisebenzayo siphuma kuwo. Iqiniso halakhic kakhulu. Uvele wangikhumbuza lokho.
"Ingcaphuno" evela emazwini akho yayiyimpendulo emculweni lapho lapho ngizama ukuphetha ku-RAKA ukuthi umyalo awulona nje izwi likaNkulunkulu (uma nje izwi likaNkulunkulu lingelona ele-mitzvah esimweni lapho uNkulunkulu ekugcineni eyala khona. hhayi ukwenza futhi ngisho nokwenqabela ukwenza). Futhi waphendula, "Ngivumelana nokuhlaziywa okubona isisekelo ekuboneni kwe-mitzvos njengohlobo lweqiniso hhayi nje ukuba khona kwezwi likaNkulunkulu." Kungenzeka ukuthi angizange ngiyiqonde kahle inhloso yakho lapho, kodwa emehlweni ami amazwi e-RAA awaqondakali ngokuphelele. Uma ungangisiza ngiqonde lo mbono ngingabonga kakhulu.
Ngokuqondene nosizi, kubonakala kimi ukuthi kunomehluko phakathi kwephutha labantu abaphuma emikhubeni (yendabuko ngokumelene ne-halakhic evela ezincwadini) kanye nesisekelo sangempela, ngoba bazisola kuphela ngokunganyatheli ezithendeni zabo futhi abangazisoli ngentshakaza. nemfene noma bekhunjuzwa. Kodwa ngiyaliveza lelophuzu.
Futhi into eyinhloko - uma ukuziphatha kubophezela kuphela ngenxa yesidingo lapho kunesidingo esiphikisana nokuziphatha akukho shred yenkinga evamile ngisho nokulimaza izinkulungwane zomonakalo. Ithini impendulo yokuthi abantu bazwa ukungqubuzana futhi bakuphendule phambi kukaNkulunkulu njengoba uchaze kukholamu? Impendulo yakho ifika ngokuqonda kwami ​​ukuthi iyiphutha futhi ngempela ayikho inkinga evamile nhlobo yokulimaza lapho uNkulunkulu ehoxise umyalo Wakhe wokuziphatha wokugwema ukulimaza. Futhi inkolelo-mbono yokulungisa umonakalo ongokomoya ngokumelene nokungalungisi umonakalo ongokomzimba ihloselwe kuphela ukuchaza imizwa yabantu hhayi ukuyithethelela. kunjalo?
Lokhu kungaqondwa ngokusikisela kwami ​​izinzuzo ezingokomoya. Laba bayagqama noma ngingenaso isibopho sokwenza isenzo esibalethayo. Kodwa-ke inzuzo iyodwa ayanele ukuchaza i-mitzvah. Ngokomfanekiso ngingasho ukuthi umyalo nawo ukhona phakade. Kodwa ngezinye izikhathi kufanele kudluliswe ngenxa yomunye umyalo.
Isibonelo sento ayenza ukuthi isikhathi sabangela abesifazane. Imvume cishe yawo wonke ama-arbitrators ukuthi kunenzuzo ekukwenzeni, futhi iningi labo lize likubheke njenge-presentential mitzvah (uRabbi Brish usho ukuthi i-Safra ibhala ukuthi iyenqaba cha). Kodwa ngokomthetho kaNkulunkulu abesifazane abakhululekile. Akudingekile ukuba wenze lokhu, ngakho-ke iyiphi i-mitzvah ekhona uma noma kunjalo?
Ngicabanga ukuthi kunenkinga evamile yokulimala futhi usizi lungokoqobo hhayi nje ngokwengqondo. Ukonakala Kokuziphatha Ngokungefani Nokomoya UNkulunkulu akasuli ngisho noma wenze lokho obukudinga.
Isingathekiso sokuthi umyalo ukhona kuze kube phakade kodwa kumele wedlule ukhombisa inkinga. Lokhu kungenzeka lapho umthombo wokuhlasela uvela emaqinisweni angokomoya athule ekhoneni futhi kungabonakali kungenakwenzeka lapho i-mitzvah iyisidalwa esihlakaniphile okufanele singitshele ukuthi yini efuna ngiyenze. Ngokwenza kanjalo, ufanisa umyalo wegunya ne-shofar ku-Gd ngeShabbat, lapho u-Gd enqabela ngempela uku- qhuma (engiyala ukuba ngilalele izazi. Ngiyavuma ukuthi kunzima ukuchaza ukuhlukana, kodwa uma kungenjalo kubonakala sengathi kukhona. Ukuthi ngenza imiyalo kaNkulunkulu ngenkathi ngihlubuka kuye futhi ngishaya ishofa naphezu kwamehlo akhe akhazimulayo naphezu kokuvinjelwa kuyinto engavamile. MM Uma kunjalo uzozindla ngakho (ngendlela okujabulisa ngayo ukuqhathanisa ne-mitzvah elandelayo ecaleni kanye nengxoxo oyilethe ngo-R. Asher Weiss, nami ngizocabangisisa ngalokhu. Futhi ukunambitheka kwengulube kugwinywa kuyo. ngendlela eyenqabela kuDauriyta, mhlawumbe noRaqa uyavuma ukuthi awukho umyalo wokudla)
Angizange ngiqonde ukuthi iyiphi inkinga evamile okufanele ilinyazwe uma endabeni okukhulunywa ngayo ungekho umyalo ovela kuNkulunkulu owenqabela ukulimaza lokhu kulimaza okuthile. Ngamanye amazwi uqonde ukuthi ngisho nasekuziphatheni komyalelo wokuthi ungalimazi uhlala ukhona kodwa kumele wedlule. Uma umyalo uyinhlangano ehlakaniphile ewazi konke futhi enquma ukuthi yenzani ngeqembu ngakho-ke lolu daba angiluboni njengolungenhla. Njengoba kushiwo ngizocabangisisa ngalokhu, mhlawumbe ngike ngahlushwa i-square analytism.
Mayelana nokuvinjelwa kwe-Dauriyta kanye ne-mitzvah, isibonelo esingcono somhlatshelo owenziwe inyamazane (ukuthi ukudla okuvinjelwe njengokudla kuhlala futhi akukho mitzvah noma ngabe kukhona futhi mitzvah futhi futhi wenze icala) yinkathazo yendodakazi kubazalwane. I-Beit Hillel iyakwenqabela kanye ne-bastard yengane. Kungenzeka yini ukuthi ngokubona kwabo, nalabo abalilela usizi lwendodakazi bafeze i-mitzvah yokulila?! (Kungenzeka ukuhlukanisa phakathi kwemithetho ngaphakathi kwe-mitzvah naphakathi kwemithetho emithini ehlukene. Kodwa iphuzu eliphelele ukuthi kimi kubonakala kufana ncamashi)
Kunamaqiniso angokomoya, njengoba ngibhale kukholamu. Kodwa azinabo ubuqiniso ngaphandle uma kukhona isigungu esizishaya umthetho futhi / noma eziyalayo.
Akukho mehluko esimweni sethu phakathi kokuvinjelwa kanye nokuntuleka kwesibopho. Wena ngokwakho uyavuma, bese wenza kube nzima. Ngimangele!
Ucabanga ukuthi kuthambekeleni ekuqaleni, ukuthi amazwi kaRaqa akhona nakunoma iyiphi i-lau Dauriyta enganqatshwa ngenxa yesenzo esithile uma kukhona isenzo futhi seqiwe i-lao yazuza i-mitzvah futhi yaphuma emsebenzini, noma amazwi akhe. kuphela enqabeni yaseThekwini ehoxisa i-mitzvah Dauriyta?
Asikho isidingo semibono nobuhlakani kuqala. Kimina kubonakala sengathi kunobufakazi balokhu eqinisweni lokuthi i-mitzvah elandelayo ecaleni ayisebenzi. Futhi kakade owokuqala wagcizelela umehluko phakathi kwalo mthetho futhi wenza i-cha enyanyekayo. Kunoma yikuphi, ezimweni eziningi, lapho umthetho unganqatshwa ngesizathu esithile (isibonelo, awukona kanyekanye), kuyisimo seNkantolo Ephakeme.
Ngokubona kwakho, asikho isidingo sevesi kulokhu, njengoba isimo ngokwaso singenalo inani le-mitzvah enjalo. Kodwa iGemara ifunda lokhu “kulowo ozonda ukuphanga isifiki.” Ngaphezu kwalokho, ngokusho kukaThos.
Ngiphawule ngenhla nge-mitzvah elandelayo ecaleni kodwa ngacabanga kuphela ngesibonelo se-sukkah ephangiwe lapho isenzo se-mitzvah singelona icala (futhi kukhona ingxoxo yakho ngamazwi ka-R. Asher Weiss no-Ezal). Manje ngibone ku-Wikipedia isibonelo sokudla i-matzah efakwe ePhasika futhi bathi lapho (angibhekanga umthombo) ukuthi abaphumi endleleni yabo yokwenza i-matzah futhi abagcini i-matzah matzah. Futhi kufakazela njengoba usho (mhlawumbe kuphela uma ekhona lapho engenayo enye i-matzah ngakho-ke kusobala ukuthi u-Gd uyamenqabela ukuba adle i-matzah ecwilisiwe).
Ngaphandle kwevesi besingeke sazi ukuthi yini eyandayo, okungukuthi, lokho uNkulunkulu akuyala ngempela, mhlawumbe ku-matzah ecwilisiwe uyala ukuthi yebo ukudla uma ingekho enye i-matzah. Angilwazi udaba kodwa isigameko sokugetshengwa okusolwa ukuthi singowokufika kuleli siyinto entsha ngisho isigebengu sesithengile futhi isifiki saso kuzo zonke izinhloso nezinhloso saso futhi sivunyelwe ukusidla ukuze sifune ukudla namanje asikafaneli i-altare. [Ngaphandle kwalokho, umqondo wokufakazela ukuthi ngenye indlela "asikho isidingo sevesi" uyangabaza futhi ikakhulukazi uma kuqhathaniswa nekholomu yevesi elifundisa okuphambene, ngoba sinemibono lapha nalapha futhi ngiyavuma. ukuthi uRAKA ukhulume amazwi akhe uze ucabange ukuthi amazwi akhe ayamukeleka nginenkinga yokucabanga ukuthi udinga ivesi ukuze uphume kule ncazelo]
Kunoma yikuphi, ake sithi njengoba usho kuvele ukuthi noma ubani odla i-matzah ecwilisiwe akawugcini nhlobo umyalo we-matzah futhi wephule ukuvinjelwa kokucwiliswa. Kodwa noma ubani owayevuthela ishofa eBhayi ngeSabatha ngenxa yeRa'akah wayenomyalelo wokuvuthela futhi wayedlula eShabbat eThekwini.
Lokhu kusho ukuthi emithethweni yokwenqatshwa ngaphakathi kweTorah i-mitzvah "ngokwayo" ichazwa kuphela ezimweni lapho inganqatshwa khona. Kodwa emithethweni yokulahlwa kweTheku i-mitzvah Dauriyta “isala” ngaphandle kokuthi empeleni kwenqatshelwe ukuyigcina futhi njengesingathekiso sokuthi umyalo ukhona kuze kube phakade kodwa ngesinye isikhathi kufanele wephulwe.
Ngokuphathelene nesiphakamiso sakho sokuthi umthetho wenkolo, noma okungenani izimiso zawo eziyisisekelo, ziphuma emaqinisweni azimele abekwe kuNkulunkulu - kubonakala kimina sengathi esikhundleni sokuvuselela enye ingxenye ebopha uNkulunkulu, ubunzima obungokwenkolo obukhona, lokhu kungafakwa emcabangweni wokuthi isidingo esikhulu sokuqeqeshwa komuntu. Ukuze andise ukuqeqeshwa nokukhetha komuntu, “uNkulunkulu uneTorah ne-mitzvos eningi” yabo, ngisho nalabo abangqubuzana nokuziphatha. Ngikhumbula ukuthi ubhale kwenye yamakholomu ukuthi ubuningi bamanani bunikeza incazelo eyengeziwe ekukhetheni, njengoba kukhona inhlanganisela engenzeka phakathi kwamanani.
10 Adar 03, 2022 - 16/30/XNUMX ngo-XNUMX:XNUMX
Lokhu engikubiza ngokubaluleka kwezenkolo nikubiza ngokuqeqeshwa komuntu. Pho ihluke kanjani? Uqonde ukusho ukuthi awekho nhlobo amagoli entweni ngaphandle kokuqedwa kwendoda? Kulandela ukuthi yonke imithetho ayinamthetho ngokuphelele (wayengakhetha eminye futhi imithetho ephambene). Kodwa-ke impikiswano kaTirgitz iyabuya, kungani kunamacala lapho akhiphe khona isinqumo esiphambene nokuziphatha.
10 Adar 03, 2022 - 22/07/XNUMX ngo-XNUMX:XNUMX
Ubhala ukuthi izindinganiso zenkolo ziphoqeleka kuNkulunkulu, kodwa noma kunjalo esimweni sokungqubuzana phakathi kwezindinganiso zenkolo wenza isimangaliso futhi avimbele umonakalo ongokwenkolo obangelwa ukwenza okwedlule. Uma ngingaqondi ukuthi izindinganiso zenkolo ziphoqelelwa kanjani kuye - khona-ke angakwazi ukukhansela noma nini lapho efuna. Futhi uma engafuni ukuphazamisa imvelo (ngisho nenkolo), kungani egxambukela ezimeni zokungqubuzana phakathi kwezindinganiso zenkolo?
11 Adar 03, 2022 - 01/53/XNUMX ngo-XNUMX:XNUMX
Akaphoqwanga ukuthi enze njalo. Kuphoqeleke kuye ukuthi leli inani. Nasekuziphatheni akaphoqelekile ukuthi akwenze lokho kodwa kuphela ukuthi lokhu kuyincazelo yokuhle.
Mayelana nalokhu okubhale lapha ”
“Nakuba uma kucatshangelwa kabanzi kungaphikiswana ngokuthi uma ngenze okuthile okuvunyelwe, khona-ke umonakalo ongokomoya wawugwenywa. Kungashiwo ukuthi uNkulunkulu wenza isimangaliso futhi avimbele umonakalo ukuze kungabikho okubi ngomuntu olungileyo njengami othembekile emthethweni. ”
Uma kunjalo, kungani engeke enze izimangaliso ngaso sonke isikhathi ukuze avimbele wonke umonakalo ongokomoya owenziwa abantu, kungakhathaliseki ukuthi benza okuthile okuvunyelwe noma cha?
20 Adar 03, 2022/19/24 ngo-XNUMX:XNUMX
Ngoba unesithakazelo sokuthi isiphetho sezwe sizoncika ezenzweni zethu. Kufana nokubuza ukuthi kungani usinikeza ukukhetha futhi ungasenzeli ukuthi senze kahle ngaphandle kokuzikhethela (futhi empeleni ungasidali nhlobo).
20 Adar 03, 2022/19/41 ngo-XNUMX:XNUMX
Impela izwe liyoncika ezenzweni zethu, kuphela ukulimala komoya akuncikile ezenzweni zethu, ngoba lapho ngokubhala kwakho kuyaye kungenelele. Futhi ngalé kwalokho, uma uNkulunkulu efuna umonakalo ongokomoya uncike nasezenzweni zethu, kungani-ke uma othile owenze okuthile evunyelwa ukuba angenele ukuze avimbele umonakalo ongokomoya? Phela kuyingubo yenqubomgomo yakhe ukuthi umhlaba uzoncika ezenzweni zethu.
20 Adar 03, 2022/23/28 ngo-XNUMX:XNUMX
Kuzoncika ezenzweni zethu kusho ukuthi senze isenzo esivunyelwe noma esenqatshelwe.
Mayelana nalokho okubhalile kulesi sigaba:
“Ngizowuchaza umbuzo wakhe. Ngokwendlela yami, uNkulunkulu usiyala ukuba sibe nemithetho emelene nokuziphatha ukuze sithuthukise izindinganiso zenkolo. Uma kunjalo, u-Tirgitz uthi, kubonakala sengathi izindinganiso zenkolo nazo ziphoqelelwe kuye futhi aziwona umphumela wentando yakhe engafanele (umthetho wakhe ozimele). Ukube imiyalo yayingewona “amaqiniso angekho emthethweni” abekwe kuNkulunkulu kodwa yayidalwe ngomthetho Wakhe, ubengawenza ngendlela ehlukile. Esimeni esinjalo ngingalindela ukuthi uma efuna (futhi azuze njengefa) enze okuhle angashayeli imithetho ephikisana nokuziphatha. Ukuba khona kwezingxabano kubonisa ukuthi imithetho ye-halakhah (noma izindinganiso zenkolo, ezikhuthazwa yimithetho efanayo ye-halakhah) nayo iphoqelelwa kuNkulunkulu, ngakho-ke uyabanjwa (noma asihlukumeze) ngenxa yesidingo salezi zingxabano. "
Kusho ukuthi emazwini enu yonke i-mitzvos nemithetho ye-Halacha iphoqelelwe ku-Gd, kodwa engxoxweni yenu lokhu kungatholakala kuphela ngokuphathelene nemithetho nemithetho ephambene nokuziphatha. Umthetho ofana nokuphindaphinda i-Shema awumeleni nokuziphatha ngakho-ke akudingekile ukuthi uphoqwe ku-Gd noma ukuthi iqiniso le-halakhic.
Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuthi ngisho nasezimweni lapho uNkulunkulu eyala okuthile okubonakala kuwukuziphatha okubi, kube ukuvimbela ukungabi nabulungisa okukhulu kokuziphatha. Ngokwesibonelo, indaba yezisulu. Ngokusobala uNkulunkulu uyala ukubulala izilwane ngokungadingekile. Kodwa kungenzeka ukuthi ngaphandle kwalo myalo, abantu bebeyoyenqaba ngokuphelele inkolo ngoba yayingeke ibe nengxenye ebalulekile ekuphileni kwenkolo eyandulela ukunikelwa kweTorah. Okusho ukuthi, ukuguqukela enkolweni yamaJuda kwakubukhali kakhulu futhi kwakuzobeka engcupheni lolu shintsho ukuba lungenzeki.
Ngaphezu kwalokho, kuyenzeka ukuthi u-Gd ngezinye izikhathi ubeke intando Yakhe kuqala (engaphoqiwe Kuye) njengento ebaluleke ngaphezu kokulimaza izidalwa Zakhe. Ngokwesibonelo, masithathe isifiso sikaNkulunkulu sokuvuzwa. Uma ngenxa yalenjongo ngezinye izikhathi kudingeka alimaze othile wezidalwa zakhe, angase azimisele ukwenza kanjalo ukuze athuthukise leso sifiso, futhi nakuba engase asilahle leso sifiso ngesikhathi esithile, usasibeka kuqala njengento ebaluleke ngaphezu kokulimaza ukuziphatha. . Okusho ukuthi, kungenzeka ukuthi ngisho nemithetho ephambene nokuziphatha ayiphoqiwe futhi ayiwona amaqiniso angcolile, nokho ukhetha ukuyiyala ngoba ibaluleke kakhulu kuye kunokulimala kokuziphatha. Futhi uma uthi lokhu ukukhetha okubi futhi kuphambene nokucatshangwa ukuthi uNkulunkulu uhlala eziphatha kahle, ngizophendula ngokuthi uNkulunkulu kufanele futhi abe nokuziphatha okuhle kuye. Okusho ukuthi, lapho eyeka intando yakhe, kukhona ukulimala kuye (uhlobo lokucabangela impilo eyandulelayo).
20 Adar 03, 2022/19/27 ngo-XNUMX:XNUMX
Ngempela, impikiswano ikhuluma kuphela ngemithetho emelene nokuziphatha.
Ngokuqondene nezisulu, angizange ngiwuqonde umbuzo. Unikeza ngokuphelele incazelo yemithetho yemihlatshelo. Kulungile. Futhi uma usho ukuthi lokhu kuyincazelo yokuziphatha engaqondile, ngombono wami akunakwenzeka.
Uma uthi okuthile kungcono emehlweni akhe, kusho ukuthi unomgomo othile ongewona umphumela wentando kaNkulunkulu engalawuleki.
20 Adar 03, 2022/19/47 ngo-XNUMX:XNUMX
Mayelana nemihlatshelo, ngangiqonde ukuthi kunemithetho ebonakala ngathi iphambene nokuziphatha, kodwa eqinisweni ekujuleni kwayo ikhuthaza ukuziphatha. Asiqondi nje ukuthi kanjani noma kungani kodwa kungase kube nencazelo ejulile ngemva kwabo enomthelela ekukhuthazeni ukuziphatha (akuyona yonke imiyalo ephikisana nokuziphatha eyiqiniso, kodwa okungenani eminye yayo ingaba njalo).
Ngokuqondene nokuza kuqala emehlweni akhe, ngisho “izifiso zomuntu siqu” kanye nezifiso zikaNkulunkulu. Okungukuthi, akuyona into ephoqelelwe kuye ngaphandle, kodwa intando yakhe yangaphakathi. Anginaso isiqiniseko sokuthi igama elithi ngokuzenzela lifanelekile lapha mayelana nentando kaNkulunkulu. Njengoba nje isifiso somunye sokuba ngumdlali we-chess oqinisekisiwe asibizwa ngokuthi isifiso esinqunyiwe (futhi asiphoqelelwe kuye ngaphandle). Kuyisifiso somuntu siqu. Mhlawumbe uNkulunkulu ufuna "ukuba ngumdlali we-chess oqinisekisiwe" emkhakheni othile, futhi ngenxa yalokho uzimisele ukudela ukulimala kokuziphatha kwabanye abantu ngezinye izikhathi.
20 Adar 03, 2022/23/31 ngo-XNUMX:XNUMX
Kunzima kimi ukuxoxa ngobuntu nezifiso zikaNkulunkulu.
21 Adar 03, 2022/00/19 ngo-XNUMX:XNUMX
Angikhulumi ngabantu abasatshiswayo ngokwabo. Ngithi kungase kube khona intando kaNkulunkulu, yokuthi nakuba ingaphoqwanga kuye ngaphandle (iqiniso elimangalisayo), isabalulekile kuye kunokulimala kokuziphatha ezidalweni zakhe, ngakho-ke uyakuyala.
21 Adar 03, 2022/07/03 ngo-XNUMX:XNUMX
Uma kungaphoqiwe kuye futhi kungekho lutho oluyinhloso yokulubeka, kuyisinqumo sakhe esinqunyiwe, kanye ne-draa kushya ku-duchy. Kuphakathi kokuthi kunqunyiwe noma kuyaphoqelelwa (ngomqondo wokuthi izindinganiso zokuziphatha ziphoqelekile kithi. Ukuba semthethweni kwazo kuyaphoqelelwa, hhayi ukuziphatha ngokuvumelana nazo). Angiboni ukuthi kungenzeka okwesithathu.
21 Adar 03, 2022/11/28 ngo-XNUMX:XNUMX
Ingabe umuntu ofuna ukuba ngumdlali we-chess oqinisekisiwe isifiso sakhe esingenasizathu? Noma kuphoqelelwe kuye?
21 Adar 03, 2022/12/39 ngo-XNUMX:XNUMX
Intando nje engenasizathu. Uma kuyimvelo kuyaphoqeleka kuye.
21 Adar 03, 2022/14/56 ngo-XNUMX:XNUMX
Kunendaba yemfihlo yomsebenzi isidingo esikhulu kanye nesifiso sikaNkulunkulu sokukhokha. Kukho kokubili, uNkulunkulu udinga ukuba sifinyelele lezi zinhloso. Kungenzeka ukuthi ukuze kufezwe lezi zinhloso akukho ukubalekela ukulimaza umuntu ngokokuziphatha. Njengoba nje abantu benza ukuhlola kwezilwane ngenjongo yokwelapha, kungenzeka ukuthi uNkulunkulu uyasisebenzisa ngisho noma ngezinye izikhathi kusilimaza, ngenxa yezidingo zakhe.
21 Adar 03, 2022/14/59 ngo-XNUMX:XNUMX
AHN. Ngakho kuyaphoqa kuye. Ukuklonyeliswa kusho ukupheleliswa kakhudlwana, futhi incazelo yokupheleliswa ayikho ezandleni zakhe.
21 Adar 03, 2022/15/41 ngo-XNUMX:XNUMX
Kungani nakanjani kuzophoqeleka kuye. Angase ayikhethe. Phela, sonke isidingo sokuthi kuthiwe uphoqelelwe kuye sivela encazelweni yokuthi uNkulunkulu ngeke akhethe into engcolile. Kodwa nginikeze isibonelo sokuthi lapho kudingekile, abantu baphinde bakhethe into engcolile ngenxa yabo futhi kufanele (ukuhlolwa kwezokwelapha kwezilwane)
Abantu bakwenza lokhu ngokuphoqwa. Isifo siphoqelelwe kubo kanjalo nendlela yokuphulukisa.
Bangakwazi ukwenza ucwaningo kubantu noma bayeke umuthi. Okusho ukuthi, asikho isidingo senani nanoma yiliphi iqiniso lenani eliphoqelela ukwenza izivivinyo ngesilo.
Kukhona iqiniso lokuthi ukuhlolwa kuyadingeka ukuze kufundwe, futhi kukhona iqiniso lokuziphatha ukuthi iShabbat iphakeme kunabantu.
Ngakho kungani umuntu kufanele eze emaqinisweni halakhic aphoqelelwe ku-Gd. Kungashiwo ukuthi kuneqiniso lokuziphatha elisho ukuthi esikhundleni sokungqubuzana phakathi kwesidingo sikaNkulunkulu nokulimala kokuziphatha kwabantu, kuneqiniso lokuziphatha elithi kungcono ukulimaza abantu kunokuyekethisa isidingo sikaNkulunkulu.
Isidingo sikaNkulunkulu siyaphoqelelwa kuye, noma akudingekile futhi asikuthetheleli ukwenqatshwa kwezindinganiso zokuziphatha.
Ngokubona kwami ​​ayikho indlela yokuphuma kulokhu: kungaba ngenkani noma ngokungafanele. Futhi ngokunganaki akwenqabi ukuziphatha. Ngaso sonke isikhathi uma uqhamuka ngendlela ehlukile kodwa impendulo iyafana. Ingubo imfishane, ungakwazi ukuvala imilenze noma ikhanda kodwa hhayi kokubili.
Kulungile, kodwa isidingo akulona iqiniso halakhic. Ngokwalokho engikuqondayo kuwena ama-halakhic noma amaqiniso okuziphatha angamaqiniso emkhakheni wokufanele hhayi okuyikho.
Akunandaba. Zisekhona izinto ezimphoqayo. Kodwa ngaphezu kwalokho, lesi sidingo siyiqiniso elidala i-OUGHT. Ingxabano iwukuthi imithetho iphoqelelwe kuye njengezindinganiso zokuziphatha. Akubonakali kubalulekile kimina ukuthi ukuphoqelela ngamaqiniso nezidingo noma ngokuqondile. Ngisacabanga ukuthi lezi zingamagugu, kodwa kungani kubalulekile?!
Yilokhu ebengikuphikisa empendulweni ngaphambilini. Ukuthi iqiniso lalesi sidingo lidala kufanele, kodwa kufanele lisuke endaweni yokuziphatha hhayi endaweni ye-halakhic noma ngenye indlela. Njengoba nje ukuhlola ngezilwane hhayi kubantu kufanele ngokokuziphatha nami angizange ngihambe.
Akunjalo ngempela ukuziphatha. Isidingo esithile noma ukubaluleka, ukuziphatha noma cha. Ngokwesibonelo, ukuqeqeshwa uNkulunkulu akusona isidingo sokuziphatha ngendlela evamile. Ngisho nokuvinjelwa kokudla ingulube akubonakali njengokubonakaliswa kweqiniso lokuziphatha.
Engangikusho ukuthi uNkulunkulu uyala imiyalo ephikisana nokuziphatha esidingweni esithile esikhona Kuye. Kodwa ngaphambi kokuthi ayale usenkingeni ukuthi uzobeka phambili yini isidingo sakhe, noma agweme ukulimaza isimilo kubantu. Le nkinga isesigabeni sokuziphatha. Njengoba nje inkinga yokuthi kwenziwa ucwaningo kubantu noma ezilwaneni isendimeni yokuziphatha.
Ngakho-ke kunenani lezenkolo (okhetha ukulibiza ngesidingo) eliphoqelelwe phezu kwalo, futhi isinqumo kuphela enkingeni phakathi kwalo nokuziphatha okuyisinqumo sokuziphatha. Ake sithi uqinisile, bese kuthiwani? Iphi ingxabano? Ngaphandle kwalokho, ngokombono wami isinqumo phakathi kwenani lenkolo noma isidingo kanye nenani lokuziphatha ngokwaso asikho ezingeni lokuziphatha.
Ngokwazi kwami ​​konke, uRabi Michi uthi:
A. UNkulunkulu ufuna okuhle ngoba muhle
B. Isimiso senkolo asifani nesimiso sokuziphatha
okwesithathu. Ekungqubuzaneni phakathi kwesimiso senkolo nesimiso sokuziphatha, ngezinye izikhathi kumelwe kukhethwe isimiso sokuziphatha
Kungani ungasho ukuthi ukungqubuzana kumane nje kuwukucatshangelwa (njengoba kuyindlela kaRabi Lichtenstein futhi evuna isimo sengqondo esikhona ezifundeni zezenkolo)?
D. Kungukuqonda kwami ​​ukuthi kulandela ukuthi uhlelo lwenkolo luphoqelelwe kuNkulunkulu futhi, kungenjalo kungani eyala ngokuphambene nokuziphatha?
Okusele kufanele kuqondwe ukuthi kungani sivunyelwa ukukhetha isimiso sokuziphatha uma kwenzeka kungqubuzana, njengoba uNkulunkulu ekhethe uhlelo lwenkolo kulokho kungqubuzana?
Isixazululo esingase sibe khona ukuthi uhlelo lwezenkolo lwanikezwa nguNkulunkulu, kodwa kusukela ngaleso sikhathi waqapha, futhi sicabanga ukuthi eqinisweni elinikeziwe wayengeyona i-mitzvah, ngakho-ke ukhethe ukuhleleka kokuziphatha.
Konke lokhu ngokwendlela yobuhlakani bendodana yethu, uRamad Shlita, uthembekile endleleni yakhe engaqapheli ukukhetha kwentando kaNkulunkulu (futhi ubone isayensi yenkululeko). Futhi doc kanye il.
Uma ufunda amazwi engqondongqondo yamandla akho uyabona ukuthi ngibhala ukuthi asivunyelwe, ngoba vele usekhethiwe. Ngakho-ke asikho isidingo sokubheka izixazululo.
Ngomhla ka-Adar 23, 03 - 2022/14/16 ngo-XNUMX:XNUMX
Lokhu kusho ukuthi akukho ukuhlonza phakathi kwe-halakhah nokuziphatha. Lezi izigaba ezimbili ezizimele ngokomthetho (yize kungekho njalo ukuphikisana phakathi kwazo kunjalo). Ukwahlulela ukuthi isenzo sinokuziphatha noma cha, nokwahlulela ukuthi sivumelekile noma senqatshelwe ngokwe-halakhically izahlulelo ezimbili ezihlukene futhi ezicishe zizimele. Isigaba se-halakhic nesokuziphatha yizigaba ezimbili ezihlukene. Yiqiniso ezimweni lapho kunokungqubuzana phakathi kokufundisa kokuziphatha kanye ne-halakhic kufanele kunqunywe ngandlela-thile (futhi lokhu akuhlali kuvumelana ne-halakhic), kodwa khona kanye ukuba khona kokungqubuzana akuyona inkinga ngokwayo. Kukhona izingxabano ezinjalo phakathi kwezindinganiso zokuziphatha ezimbili (njengesibonelo sokusindisa impilo ngokubangela ubuhlungu), futhi akunakuphikwa ukuthi kuzoba nenani le-halakhic kanye nenani lokuziphatha.
Caphuna kukholomu 15. kanye nokuphawula kwakho ngezitabane engxoxweni neLondon. Ababona yini abafundisi ngezinye izikhathi abangayigcini imithetho yenkolo? Ngicela ungichazele umehluko?
Ngomhla ka-Adar 23, 03 - 2022/14/43 ngo-XNUMX:XNUMX
Ngibhekane nalokhu ekuqaleni kwencwadi yesithathu ku-trilogy. Ngamafuphi, uma kunokungqubuzana okukhulu umthetho uhlala ubusa. Ngokwesibonelo, kuma-Amaleki. ITorah ngokwayo yayicabangela inani lokuziphatha kodwa nokho yayala ngakho. Kodwa uma ukungqubuzana kwenzeka ngengozi, njengokulawula ingqondo kanye neShabbat, lapho akwenzeki ukukhipha kuwo wona kanye umyalo ngeShabbat wokuthi yenqaba i-Pikun noma ngokuphambene nalokho. Ezimweni ezinjalo kufanele uzenzele isinqumo.
Futhi konke lokhu lapho umyalo ucacile eTorah. Uma kuwumphumela wokuhunyushwa noma intshumayelo, khona-ke ukungabaza kungena lapha ukuthi lo mthetho awulungile.
Ngomhla ka-Adar 23, 03 - 2022/14/27 ngo-XNUMX:XNUMX
Ngangivame ukusho ezingxoxweni mayelana nokuthambekela okuphambene ebuJudeni, ukuthi umbono wakho uthi kulokhu ukuziphatha kufanele kukhethwe phezu kweTorah, ngokumelene noRabi Riskin owenza i-okimata kuTorah, norabi bendabuko abenza okimata ngokuziphatha. Futhi isiko lika-Israyeli Torah.
Vele, ngijabule kakhulu ngawe ukwenza umbono wami ucace. Endabeni ye-Daurite halakhah ecacile ephikisana nokuziphatha, ingabe ikhona indawo yokukhetha ukuziphatha? Kanti iHalacha Durban? Ingabe i-Okimata yenziwe i-Dauriyta halakhah ngendlela engaphikisani nokuziphatha, ngisho nokuphambene nesiko le-halakhic?
Ngomhla ka-Adar 23, 03 - 2022/14/44 ngo-XNUMX:XNUMX
Ngacacisa. Ngokuphathelene nemilingo Yebo kungenzeka. Amasango okuhumusha ayengakhiyiwe.
27 Adar 03, 2022 - 14/54/XNUMX ngo-XNUMX:XNUMX
Umbuzo ongenacala. Iqiniso lokuthi kukhona ukuziphatha okusebenzayo (kwaphezulu, isibonelo) - lokhu kuziphatha kubhaliswe kuphi? Ngabe sithatha ngombono wethu ukuthi ukubulala nokweba akufanele kuvunyelwe? Okusho ukuthi, uma kuyinto efundiwe ekuqondeni komuntu noma ezivumelwaneni zezenhlalakahle zendabuko, akusafanele ukuphoqelela umuntu ongazange ayamukele leyo ngqondo. Futhi uma ngandlela thize ihlobene neTorah, khona-ke futhi ingumthetho waphezulu obhaliwe, futhi uphi umehluko phakathi kweTorah nokuziphatha?
27 Adar 03, 2022 - 15/30/XNUMX ngo-XNUMX:XNUMX
Kulotshiwe esibhebheni sezinhliziyo zethu. ITorah iyasifundisa futhi nenze okulungile nokuhle, kepha ayichazi ukuthi isho ukuthini. Ucabanga ukuthi wonke umuntu uyaqonda ukuthi kusho ukuthini ukuhleleka kokuziphatha (kubhalwe ezibhebheni zenhliziyo yakhe). Okuqukethwe kokuziphatha kufundwa ekuziqondeni kokuziphatha, kodwa umsebenzi wokukulandela kungenxa yentando yaphezulu. Njengoba ngichazile kukholamu. Uma kukhona umuntu ongenawo lo mqondo kusuke kuwumuntu ogulayo futhi akukho okumhlanganisa nakho. Njengoba nje akukho okuhlanganisa umuntu oyimpumputhe ongaboni.
Umehluko phakathi kwe-halakhah nokuziphatha usemyalweni. Imiyalo ekuTorah ikhuluma ngeHalacha kuphela, futhi ukuziphatha akukho ngaphansi komyalo. Kuyintando yaphezulu ngaphandle komyalo ngakho-ke kuhlala ngaphandle komthetho. Ngakho-ke futhi okuqukethwe kwayo akuveli eTorah kodwa ngaphakathi kwethu. Ngakolunye uhlangothi, ku-Halacha okuqukethwe nakho kubhalwe kuyiTorah. Ngakho-ke, “futhi nenza okulungile nokuhle” alizange lifakwe ekubalweni kwama-mitzvos kunoma isiphi uquqaba.
27 Adar 03, 2022 - 15/37/XNUMX ngo-XNUMX:XNUMX
Okusho ukuthi, kunombono wokuthi "ukwethembeka nokulunga" yinto wonke umuntu ayiqondayo emcabangweni wakhe oyisisekelo, okungukuthi, izinto esizamukela njengokubulala nokudlwengula, kodwa umbuzo ofanayo owawubuza abangakholelwa kuNkulunkulu - ungathini i-mercenary ecabanga ukuthi indlela yakhe yokusebenza ingukubulala. Ubufakazi bokuthi kunesimiso sokuziphatha sangaphandle kumuntu, saphezulu, kodwa futhi, lesi simiso asichazi lokho okufakwe "ekulungeni nasebuhleni" baso, futhi sizophinda sikubuze ukuthi ungathini nge-mercenary ekholelwa ukuthi ukubulala ukulunga lokulunga. Ngamafuphi, ngingakujabulela ukucwenga ukuthi iyiphi inkinga oyixazululayo ngokucabangela ukuthi ukuziphatha kudinga uNkulunkulu.
27 Adar 03, 2022 - 16/19/XNUMX ngo-XNUMX:XNUMX
Uhlanganisa izindiza. Ngibuze umbuzo hhayi ngomuntu ongaqondi ukuthi ukubulala akuvumelekile kodwa oqondayo ukuthi kwenqatshelwe kodwa ongazizwa ezinikele kukho. Lona umbuzo ohluke ngokuphelele. Ongaqondi uyimpumputhe. Yini okufanele ngimtshele yona? Okusho ukuthi impumputhe engaboni iqiniso futhi iphika ubukhona bemibala isibonelo.
Engibabuzile wukuthi ikuphi kubo okuwumthombo wokuba semthethweni kwesimilo hhayi okushiwo yimithetho yokuziphatha.
Ngaphandle kukaNkulunkulu nami, ngokuzwa ubuqiniso bemithetho yokuziphatha, bengingeke ngiboshwe yiyo. Ngingawuchitha lo muzwa njengokukhohlisa okuqonda kimina ukuthi awunakho ukufaneleka kwangempela. UNkulunkulu kuphela ongakunikeza ukuba semthethweni.
27 Adar 03, 2022 - 16/25/XNUMX ngo-XNUMX:XNUMX
Ngaqaphela. Empeleni nithi lokho okufakiwe ekuziphatheni - kwaziwa yiwo wonke umuntu, kungokwemvelo kithi ukuthi ukubulala nokudlwengula akulungile. Futhi uphikisana nokuthi lokhu kuziphatha emnyombeni wako kumele kwamukeleke kuwo wonke umuntu, ngaphandle kokushintsha kwamasiko nezikhathi. Umehluko phakathi kongakholelwa kuNkulunkulu nekholwa wukuthi ikholwa liyachaza ukuthi kungani lokhu kuziphatha kulibophezela. Ngiyakuqonda kahle?
27 Adar 03, 2022 - 16/26/XNUMX ngo-XNUMX:XNUMX
ncamashi kanjalo. Ngicabanga ukuthi ngikuchazile lokhu kukholamu kanye nengxoxo yokuqala.
27 Adar 03, 2022 - 16/33/XNUMX ngo-XNUMX:XNUMX
ק Vuliwe Phendula umbuzo mayelana nezifundo
Ukulungiswa kwephutha (Freudian?) Vuliwe Ngokushona kukaProf David Halvani Weiss ongasekho (ikholomu 485)
Isandla. Vuliwe Phendula umbuzo mayelana nezifundo